နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုမင်းကိုနိုင်၏မိခင် ဒေါ်လှကြည်၏ ရင်တွင်းပြောစကား
ကျွန်မဒီလိုပွဲမျိုး အတွေ့အကြုံမရှိပါဘူး၊ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ စကားပြောခွင့်ရတဲ့ဟာကို စကားပြောမှားဆိုမှားရှိရင် ကျွန်မကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့ အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါ တယ်။ အခုကျွန်မမွေးနေ့မှာ ကျွန်မသားမွေးနေ့မှာ ကျွန်မလာတဲ့အခါ ကျွန်မကိုတွေ့တဲ့ ကလေးတွေက ပြောပါတယ်။ အမေ အမေ့သားကို အမေ မပိုင်တော့ပါဘူး။ တိုင်းပြည်က ပိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီပြောလိုက်တဲ့ စကားလေးကို ကျွန်မအရမ်းဝမ်းလည်းသာပါတယ်။ ပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ သူတို့တွေဟာ သားအပေါ်မှာ ချစ်ကြတာကိုး။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်မမှာ မွေးထားတဲ့ သားလေးက တစ်ယောက်တည်းပါ။ အခု ကျွန်မမှာ သားတွေ အများကြီး ရှိနေပါပြီ။ ဝေမျှပေးတဲ့ သားတွေ၊ သမီးတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါ ပြီ။ အခုလို အချိန်အခါမှာ မိဘတိုင်းဟာ ကျွန်မကို ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲလို့ မေးကြပါတယ်။ သားသမီးရှိကြတဲ့ မိဘတွေက ဒီလိုအချိန်အခါမှာ ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာ ရင်ထဲမှာ အကုန်လုံးရှိကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်မပြောဖို့ မလိုပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့လိုပဲ မိသားစုအပေါင်းတွေဟာ အများအတွက်ကို အနစ်နာခံပြီးတော့ ပါရမီ ဖြည့်ပေးနေကြတဲ့ မိသားစုအားလုံးကို ကျွန်မ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ လူဆိုတာ လောကဓံတရား ဆိုတာ အကုန်လုံးရှိကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ မေတ္တာမျှဝေပေးနေတဲ့ မိသားစုတွေ အားလုံးကို အကုန်လုံးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကိုနိုင်နဲ့တကွ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာ ရှိနေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအပေါင်းတို့ အမြန်ဆုံး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရပါစေလို့ ကျွန်မ ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ မိသားစုတွေ အကုန်လုံးပါ မေတ္တာပို့ အမျှပေးဝေနေသလို မိသားစုတွေကို ကျွန်မ ဘာလက်ဆောင် ပေးချင်သလဲဆိုတော့ ရှင်ဇနကဘိဝံသ ဟောထားတဲ့ တရားလေးတစ်ပုဒ် ရှိပါတယ်။ လူမှုဆိုလျှင် လူလိုပင် လောကဓံ ရှိမြဲ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ အများပါပဲ။ ကျွန်မ ပြောချင်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ကျွန်မတို့ မိသားစုတွေ အကုန်လုံးဟာ သားလေးတွေကို မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ အဲဒီလို မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းပဲ အမြန်ဆုံးလွတ်ပါစေလို့ ကျွန်မ ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သပါတယ်။ ဒါပါပဲ ကျွန်မ ပြောချင်ပါတယ်။
သတင်းရင်းမြစ်..Eleven Media Group
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, November 12, 2011
'၁၁၊ ၁၁၊ ၁၁' အခမ်းအနားများ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာ
ရန်ကုန်မှာတော့ '၁' ခြောက်လုံးစုံသည့်နေ့ကို အားကစားစာစောင်များဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာလာသည့် Eleven Media က သူများတွေထက် ပိုသဲပိုကျဲကာ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်မှာ ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပခဲ့သည်။
ဒေလီမြို့ရောက် မြန်မာအဖွဲ့က ပြည်တွင်းက နိ်ုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဘာသာပေါင်းစုံ ဆုတောင်းပွဲ လုပ်ခဲ့သည်။
ဂျာမဏီမှာလည်း ၁၁၊ ၁၁၊ ၁၁ ရက်နေ့ကို ရွေးချယ် လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။
စပိန်နိုင်ငံ မက်ဒရစ်မြို့မှာ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နေ့က လူတစ်ဦး ၁၁၊ ၁၁၊ ၁၁ ရက်နေ့အတွက် ဖောက်မယ့် ကံစမ်းမဲကို ၀ယ်ယူ အားပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်း ဟာယာနားပြည်နယ်မှ ပန်ချာပီတစ်ဦး ၁၁၊ ၁၁၊ ၁၁ ကိတ်မုန့်ကို ပုံဖော်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ နက္ခတ်ပညာ ၀ါသနာကြီးတဲ့ အိန္ဒိယသားတွေက အဲဒီရက်ကို အောင်မြင်မှုတွေ စတင်သယ်လာမည့်ရက်ဟု ယူဆကြသည်။
အင်ဒိုနီးရှား အရှေ့ဂျာဗားပြည်နယ်ရဲ့ ဆူရာဘာယာမြို့ ဆေးရုံမှာ ၁၁၊ ၁၁၊ ၁၁ ရက်နေ့က မွေးတဲ့ ကလေး ၁၄ ယောက်ကို ပြထားသည်။ အဲဒီနေ့မှာ မွေးဖွားတဲ့ ကလေးတွေကို စည်းစိမ်ကြွယ်ဝချမ်းသာမယ့်သူတွေဟု အင်ဒိုနီးရှားတို့က ယုံကြည်ကြသည်။
၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကွာလာလမ်ပူမြို့ Thean Hou ဘုရားကျောင်းမှာ စုံတွဲများ အစုအပြုံလိုက် လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ ၁၁၊ ၁၁၊ ၁၁ မင်္ဂလာရက်မြတ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းက သူတို့အတွက် တသက်တာ ရွှေလက်မြဲနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရင်းမြစ်..Maukkha Education Magazine.
မင်း က မင်း ၊ ငါ က ငါ ၊ You are you, I am me
ဝေမျှ ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဝန်းရံပေးပါ။( ရေးသားသူ - ကိုမောင်မောင်ဝမ်း)
ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဟေ့လို့ ဂုဏ်တင်ခဲ့သူ၊ မြန်မာတစ်ဦးအဖြစ် ကမ္ဘာ့ရေးရာ အထွေထွေကိစ္စတွေမှာ အဓိကနေရာက တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ တတိယမြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ် ဦးသန့်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယော့ခ်မြို့ ကုလသမဂ္ဂ ဗဟိုဌာန ချုပ်ကြီးမှာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ဖို့ ကျမ်းသစ္စာဆိုခဲ့တဲ့နေ့ဟာ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က နှစ် ၅၀ ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။
ဦးသန့်ရဲ့ ကြီးမားသောဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကို အသိအမှတ်ပြု အောက်မေ့ သတိရခြင်းအားဖြင့် ယခုနှစ်မှာ ဦးသန့်ရဲ့ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခြင်း နှစ် ၅၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ရန်ကုန် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်မှာ ကျင်းပခဲ့ရာ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ အပါအ၀င် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ စုံလင်စွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျူးဘား ဒုံးပျံ အကျပ်အတည်းကိစ္စမှာ အမေရိကန်သမ္မတ ကနေဒီနဲ့ ဆိုဗီယက် ယူနီယံ ၀န်ကြီးချုပ် ခရူးရှပ်ဖ်တို့ ကြားမှာ အချက်အချာကျတဲ့နေရာကနေပြီး ကူညီဖြေရှင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကမ္ဘာအနှံ့ နျူကလီးယားစစ်ပွဲကြီး ကို ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ ဦးသန့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများထဲက တစ်ခုပါ။ ဒါကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ကနေဒီက "ဒီကမ္ဘာကြီးဟာ ဦးသန့်အပေါ်မှာ ကျေးဇူး အကြွေးတင်နေတယ်"လို့ ပြောခဲ့ကြောင်း ဦးသန့်ရဲ့မြေးဖြစ်သူ သမိုင်းပညာရှင် ဦးသန့်မြင့်ဦးက နှစ် ၅၀ ပြည့် ဂုဏ်ပြု အခမ်းအနားမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာသာမက အာရှမှလည်း ပထမဆုံး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သူ ဦးသန့်ဟာ ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်ကြီးများက ချီးမြှင့်တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ၃၀ ကျော်ကို ရရှိခဲ့ပြီး အထွေထွေအတွင်းရေး မှူးချုပ်ရာထူး တာဝန်စတင်ယူချိန် ၁၉၆၁ ခုနှစ်ကစ ၁၉၇၁ ခုနှစ် အထိ ၁၀ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ချိန်အတွင်း ကမ္ဘာ တစ်ဝန်း ပြဿနာအရပ်ရပ်ကို အောင် မြင်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့အချိန်အထိ စွမ်းအားကြီးမား တဲ့ ဒီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရာထူးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးသန့်ကိုယ်တိုင်က "ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်သည် အာရှ၊ အာဖရိက၊ လက်တင်အမေရိကန်၊ သို့မဟုတ် ဥရောပလူမျိုးများဖြစ်ရမည်ဟု ကျွန်တော် မယုံကြည်ပါ။ ကျွန်တော်ယုံကြည်သည်မှာ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်မှာ ရှိရမည့် သမာဓိရှိခြင်း၊ အရည်အချင်းပြည့်ဝခြင်း၊ ကျွမ်းကျင် လိမ္မာမှုရှိခြင်း၊ အမြော်အမြင်ကြီးခြင်း၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးအရေးကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်တတ်ခြင်း၊ အဖွဲ့ အစည်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရား မျှတမှုနှင့် တိုးတက်ရေးတို့တွင် စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် စစ်မှန်သည့်ဆန္ဒရှိခြင်းတို့ နှင့် ပြည့်စုံရမည်"လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ကျရောက်ခဲ့တဲ့ ဦးသန့် နှစ် ၁၀၀ ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် လက်ရှိကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေး မှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းကလည်း "ဦးသန့်ဟာ ကုလသမဂ္ဂ ဒုတိယ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဒက်ဟမ္မားရှိုး ရုတ်တရက် ကွယ်လွန် သွားပြီးနောက် ၁၉၆၁ ကစပြီး အဖွဲ့ အစည်းကြီးကို ပဲ့ကိုင်လမ်းညွှန်ပေးခဲ့တယ်"လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ဦးသန့်ဟာ တကယ့် လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့အမြင်မျိုး၊ လူတစ်ဦးချင်းကြားမှာ နားလည်မှုတွေနဲ့ တစ်ခုတည်းသော ကမ္ဘာဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုး ဖြစ်လာအောင် လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ဇောင်းပေးပြောခဲ့သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း မစ္စတာဘန်ကီမွန်း က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က "မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ ပထမဆုံး အာရှမှ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ထွက်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့အားလုံး ဂုဏ်ယူတာပေါ့။ ဒါ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရော၊ အာရှအတွက်ပါ ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်"လို့ ဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဦးသန့်မြင့်ဦးက အဘိုးဖြစ်သူရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို မမေ့လျော့ကြဖို့ အရေးကြီးကြောင်းလည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ အကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင်က "သွားလေသူ ကြာသွားတော့ သတိရမှုနည်းလာတာပေါ့။သို့သော်ငြားလည်း အခု နောက်ပိုင်းမှာ ဦးသန့်ရဲ့စာတွေ ပြန်ထုတ်တာတွေရှိတယ်။ ဦးသန့်ရဲ့အကြောင်းတွေ ပြန်ရေးလာတာတွေရှိတယ်။ ဦးသန့်နဲ့ ပတ်သက် တာတွေ ပြန်လုပ်လာကြတယ်။ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ယူနိုင်မယ့် အားမာန်မျိုးတွေ မွေးထုတ်လာနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်"လို့ ပြောကြားပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး သံတမန် မစ္စတာ တိုမာစ်အိုဂျေကင်တားနားကလည်း "မြန်မာနိုင်ငံ၏ သားကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်၍ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စများတွင် နှစ်မြှုပ်ပြီး လုပ်ခဲ့သော ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့် သည် မြန်မာ လူမျိုးတို့အတွက် သမိုင်းမှာ အားတက်စေသည်"လို့လည်း မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို အီးမေးလ်ကတစ်ဆင့် ချီးကျူး စကားပြောခဲ့ပါတယ်။
၁၉၀၉ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ မှာ ဦးသန့်ကို ပန်းတနော်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၂၆ ခုနှစ်မှာ ပန်းတနော် အမျိုးသား အထက်တန်းကျောင်းမှ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲအောင်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပညာရပ်များကို ဆည်းပူး လေ့လာ ခဲ့ပါတယ်။
ဦးသန့်ဟာ ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ Press Director of Burma အဖြစ် ခန့်ထားခံရပြီး ၁၉၄၈ မှာ Director of Broad- casting ၊ နောက်နှစ်မှာ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှာ Secretary of Government of Burma အဖြစ် ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၅၃ ခုနှစ် ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးမှာ စီမံကိန်းများဆိုင်ရာ အတွင်းရေးမှူး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှာ BurmaEconomic and Social Board ရဲ့ Executive Secretary တာဝန်ကို ထပ်မံပေးအပ်ခြင်းခံရပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်တာဝန် မထမ်းရွက်မီကပင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အမြဲတမ်း ဌာနေကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် သံတမန် ရာထူးကို ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၁ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ပင်လယ်ဓားပြများလက်တွင် တစ်နှစ်ကျော်ကြာ ဖမ်းဆီးခံမြန်မာသင်္ဘောသားများ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
ဆိုမာလီပင်လယ်ဓားပြများလက်တွင် တစ်နှစ်ကျော်ခန့် ပြန်ပေးဆွဲ ခံခဲ့ရသော ထိုင်းနိုင်ငံ PT INTERFISHERY ကုမ္ပဏီပိုင် P.V Prantalay12 ငါးဖမ်း ရေယာဉ်မှ ရေလုပ်သား ၁၃ ဦးသည် မြန်မာ နိုင်ငံသို့ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက် နေ့တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာခဲ့ကြသည်။
"ဓားပြတွေလက်ထဲမှာ တစ်နှစ်နဲ့ သုံးလနေခဲ့ရတယ်။ ၂၀၁၀ ဧပြီလ
၁၈ ရက်နေ့မှာ ရနောင်းကနေ ဂျာဘူတစ် နိုင်ငံကိုအသွား အိန္ဒိယရေပိုင်နက်ထဲမှာ ပြန်ပေးဆွဲခံရတာ။ ပြောက်ကျားဝတ်စုံ ၀တ်ထားတဲ့ ဓားပြ ၂၅ ယောက်လောက် ပါတဲ့ စပိဘုတ်နှစ်စင်းက လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ချိန်ပြီး သင်္ဘောတွေကို ရပ်ခိုင်းတယ်။ ပထမတော့ ကင်းလှည့်တပ်တွေပဲ ထင်ပြီး လှေပေါ်ရောက်မှ ဓားပြတွေမှန်း သိရတယ်။ သူတို့က လက်နက်တွေနဲ့ဆိုတော့ ဘာမှ မတတ်နိုင် တော့ဘူး။ကုမ္ပဏီပိုင် သင်္ဘောနံပါတ် ၁၁၊ ၁၂ နဲ့ ၁၄ သုံးစင်း စလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် ပြန်ပေးဆွဲခဲ့တာ"ဟု ဖမ်းဆီးမှုမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သော အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် ကိုပန်းအောင်က ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် အခြေအနေကို ရန်ကုန်မြို့တွင် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ တွေ့ဆုံစဉ် ပြန်လည်ပြောပြခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် ၎င်းတို့၏ နံပါတ် ၁၂ လှေတွင် မြန်မာ၂၀ နှင့် ထိုင်းငါးဦး ပါဝင်ကာ လှေသုံးစင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားဦးရေ ၆၀ ခန့်ပါဝင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
"ခုပြန်လာတာ မြန်မာ ၁၃ ယောက် ပြန်လာတယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ ဆိုမာလီယာမှာ ကျန်ခဲ့တယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ ဓားပြတွေဖမ်းထားတုန်းမှာ စစ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့တွေ့တော့ သူတို့ အလစ်မှာ ရေထဲခုန်ချပြီး စစ်သင်္ဘောက ကယ်သွားတယ်။ ကျန်တဲ့ငါးယောက်ကတော့ ဖမ်းဆီးခံထားရချိန်မှာ အာဟာရ ပြတ်တာရော၊ သောက်သုံးရေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မရတာရော၊ ကြုံသလို နေရင်းစားရင်း နေမကောင်းဖြစ်လာပြီး ဆုံးကုန်ကြတယ်။ နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ ပုံစံတွေကတော့ ဖောရောင်၊ အသက်ရှူ ကျပ်ပြီး ဆုံးကြတာ။ သူတို့ပေးတဲ့ရေတွေ က ငန်လည်းငန်၊ နံလည်းနံတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါပဲသောက်စရာမရှိတော့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘဲ သောက်ရတာပဲ။ လူတိုင်းလိုပဲ ဖောရောင်တာမျိုး ခံစားရတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုတာ လုံးဝမမြင်ခဲ့ရဘူး။ သူတို့စားတဲ့ ဂျုံကို မီးဖုတ်ထားတာတို့၊ ခေါက်ဆွဲတွေကို ခရမ်းချဉ်သီးဆော့နဲ့ နယ်ထားတာမျိုးတွေ စားကြရတယ်။ တစ်ခါတလေ တစ်နေ့လုံး တစ်နပ်ပဲ စား ရတာလည်းရှိတယ်"ဟု ကိုပန်းအောင် က ၎င်းတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အခက်အခဲများကို ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရစဉ် နေ့ရက်များအတွင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရမှုများသည် ၎င်းတို့၏ တစ်သက်တာ မမေ့နိုင်စရာအဖြစ် အပျက်များ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
"ဖမ်းပြီးလှေတွေကို ဆိုမာလီယာနိုင်ငံ ရေပြင်ထဲမှာ၂၀၁၀၊ ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့ ကစပြီး ကျောက်ချထားတယ်။ လှေ သုံးစင်းကို ဒေါ်လာကိုးသန်းနဲ့ ရွေးဖို့တောင်းတယ်။ သူတို့တောင်းတဲ့ငွေက သိပ်များတော့ သူဌေးကလည်း မရွေးနိုင်ဘူး။ ကြာလာတော့ စားစရာတွေလည်း ပြတ်၊ လူတွေလည်း မကျန်းမမာဖြစ်လာတယ်။ သေတဲ့သူတွေရှိလာတယ်။ ၁၁ လပိုင်းမှာ ဓားပြတွေက ကျွန်တော်တို့ လှေတွေနဲ့ ဓားပြထပ်တိုက်ပြီး သီရိလင်္ကာ ငါးဖမ်းလှေလေးတစ်စင်းကို ထပ် ဖမ်းလိုက်ကြတယ်။ နောက်အဲဒီလှေနဲ့ ဓားပြ ၁၃ ယောက်က ဓားပြတိုက်ဖို့ ထပ်ထွက်သွားကြတယ်။ နောက် အဲဒီ သင်္ဘောက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သင်္ဘော တစ်စင်းကို ဖမ်းမိပြီလို့အကြောင်းပြန်တယ်။ နောက် ကျွန်တော်တို့သင်္ဘောက ဆိုမာလီယာနိုင်ငံက ကဒါအတ်ဆိုတဲ့ ရွာမှာ ကမ်းကပ်ဖို့ပြန်လာ တယ်။အဲဒီမှာ ဓားပြတိုက်ဖို့ထွက်သွားတဲ့ သီရိလင်္ကာ သင်္ဘောကလည်း ကမ်းကပ်ထားပြီ။အဲဒီမှာ သူတို့အချင်းချင်း စကားများပြီး သင်္ဘောကို အကပ်မခံဘဲ အပြန်အလှန် ပစ်ကြတာ ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်ကို သေနတ် ရှပ်မှန်သွား တယ်။ အဲဒီတော့မှ သူတို့ပစ်တာတွေ ကို ရပ်လိုက်ကြတယ်။ ဓားပြတစ်ယောက်က လှေကိုဝင်မောင်းရင်းနဲ့ ဂီယာမှားထိုးပြီး ဖမ်းလာတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သင်္ဘောနဲ့ တိုက်မိတာ လှေဦးကွဲသွားတယ်။ ဒါနဲ့ ဆိုမာလီနိုင်ငံ ဒီနူးဒါးရွာနားမှာ ကျောက် ချထားရင်းနဲ့ တစ်နေ့မှာ လေပြင်းတိုက်လို့ ကျောက်ကြိုးပြတ်ပြီး ကမ်းခြေက ကျောက်ဆောင်နဲ့တိုက်ပြီး လှေကမြုပ်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ နောက်တစ်ဖွဲ့က ရောက်လာပြီး သူတို့ အချင်းချင်း တစ်ညလုံး ပစ်ပြန်ရော။ ကျွန်တော်တို့လည်း သဲထဲမှာ တိုးနေရတာပေါ့။ မိုးလင်းတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်တဲ့ ဓားပြ အဖွဲ့က သူတို့အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ၁၈ ယောက်ကို ကားသုံးစီးနဲ့ သူတို့ စခန်းချတဲ့ ကန္တာရထဲကို ခေါ်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ ခြောက်ရက်လောက်နေရပြီး နောက်ကန္တာရထဲက နေရာသစ်တစ်ခုကို ခေါ်သွားပြန်တယ်။ သူတို့ကို (သင်္ဘော) သူဌေးက မရွေးရင်တော့ ငါတို့မှာ ပေးစရာ ပိုက်ဆံလည်းမရှိဘူးဆိုတာ ပြောထားတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ဖမ်းထားလည်း အပိုပဲဆိုတာသိပြီး ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ ထိုင်းလေးယောက်ကိုတော့ ခေါ်ထားလိုက်တယ်။ ကန္တာရနေရာသစ်မှာ ခြောက် ရက်လောက်နေပြီး သူတို့ကို သပ်သပ်ခေါ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ၁၄ ယောက်ကိုတော့ နောက်နှစ်ရက်လောက်မှာ ဆိုမာလီယာ ငါးယောက်က နှစ်ရက်လောက် လမ်းလျှောက်ခရီးသွားရတဲ့ ကဒါကတ်ရွာနားက ချုံတော ထဲမှာထားပြီး ပြန်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ နှစ်ရက်လောက်ထပ်နေရပြီး ကားနဲ့ ဆိုမာလီယာနိုင်ငံ ကဒဝေးမြို့ကို ခေါ်လာတယ်။ ဩဂုတ်လ၊ ၂၀၁၁ မှာ ကဒဝေးမြို့က ဂလိုဘယ်ဟိုတယ်ကို ရောက်ပြီး ယူအင်န်က အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ပြီး ပြန်ဖို့ စီစဉ်ပေးကြတယ်"ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဆိုမာလီယာဓားပြများနှင့် ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်သည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းသက်တမ်းအတွင်း ပထမဆုံး ကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရေလုပ်သားများက ပြောသည်။
"ဓားပြတိုက်တယ်ဆိုတာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာသာ ကြည့်ဖူးတာ။ သူတို့က လူကိုနှိပ်စက်တာမျိုးတော့မရှိဘူး။ အဖိုးတန်ပစ္စည်း၊ သူတို့ကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်းမှန်သမျှတော့ အကုန်ဆွဲသွားတာပဲ။ ဆေးတွေလည်း အကုန်ယူသွားတယ်။ သဲကန္တာရ ဆိုတာလည်း ရုပ်ရှင်မှာပဲမြင်ဖူးတာ။ ခုတော့ သဲကန္တာရထဲမှာလည်း ရက်အတော်ကြာ နေခဲ့ရတယ်။ သဲတွေက တစ်ချိန်လုံးလွင့်နေလို့ မျက်စိတောင် ကောင်းကောင်း ဖွင့်လို့မရဘူး။ ညအိပ်ရင် မျက်နှာကိုအုပ်ပြီး အိပ်ရတယ်။ မနက် မိုးလင်းလို့ ထရင် တစ်ကိုယ်လုံး သဲတွေချည်းပဲ။ ပူလည်း တအားပူ တယ်"ဟု ကိုပန်းအောင်က ပြောသည်။
ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်များကြောင့် ဓားပြတိုက်ခံရသောဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်များကိုပင် မကြည့်ချင် လောက်အောင်ဖြစ် ရကြောင်း သင်္ဘောသားတစ်ဦးက ဆိုသည်။
သင်္ဘောသားများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကောင်စစ်
၀န်အရာရှိ တစ်ဦးအား အထူးတာ ၀န်ပေးအပ်ကာ ကင်ညာနိုင်ငံ၊ နိုင်ရိုဘီ မြို့အထိ သွားရောက်ခေါ်ဆောင်စေခဲ့ ကြောင်း နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင်ဖော်ပြသည်။
"ကျွန်တော်တို့ကို စင်းလုံးငှား လေယာဉ်နဲ့ နိုင်ရိုဘီကနေ ဘန်ကောက်၊ နောက် ရန်ကုန်ကို ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ သံရုံးတာဝန်ရှိ သူတွေ လာတွေ့ပြီး အားပေးစကားတွေလည်း ပြောကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်အားခ၊ လစာတွေအတွက်လည်း ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်" ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော ရေလုပ်သားများသည် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ တွင် ရန်ကုန်မြို့မှ ၎င်းတို့၏ နေရပ်အသီးသီးသို့ ထွက်ခွာ သွားကြပြီဖြစ်သည်။ထိုသတင်းအား မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ် တွင်ဖော်ပြထားပါသည်.။
အသက်မပြည့်သော မြန်မာကလေးလုပ်သားများ တရုတ်နိုင်ငံ တစ်နေရာမှ လွတ်မြောက်လာ
(Shanghai Daily မှ 10 Nov 2011 ရက်စွဲပါ “Child labours from Myanmar rescued from slavery” သတင်းကို Yangon Chronicle မှဘာသာပြန်ဆိုသည်)
မြန်မာနိုင်ငံသား ဆယ်ကျော်သက် ၇ ဦးသည် တရုတ်ပြည် အရှေ့ပိုင်း ဇီကျန်းပြည်နယ် ယူယိုမြို့ အထည်အလိပ် စက်ရုံတစ်ခုတွင် ကျွန်သဖွယ် ခိုင်းစေခြင်း ခံခဲ့ကြသည်ပာု သိရှိရသည်။
စက်ရုံမှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာပြီး အဝေးပြေးလမ်း တစ်လျှောက် ၃ ရက်ခန့် လမ်းလျှောက်လာရင်း အစာငတ်၊ မောပန်းနေသော မြန်မာ ဆယ်ကျော်သက် ၂ ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်ပာု ပြည်တွင်းထုတ် ကီယန်ဂျင်း ညနေခင်း သတင်းစာက ယနေ့ သတင်းဖော်ပြထားသည်။
သတင်းတွင် ကျား/မ ခွဲခြားဖော်ပြခြင်း မရှိသော မြန်မာဆယ်ကျော်သက် ၂ ဦးသည် မြန်မာနယ်စပ် အနီး ပြုလုပ်သော အလုပ်သမားပွဲဈေး (မြန်မာကျေးလက်မှ နွားပွဲဈေးနှင့် အလားတူ)မှတဆင့် စက်ရုံသို့ ရောက်ရှိသွားခြင်း ဖြစ်သည်ပာု ဆိုသည်။ စက်ရုံသို့ ရောက်သွားပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းများကို အလုပ်ရှင်က သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီး ထွက်မပြေးနိုင်အောင် အစောင့်ချကာ ပိတ်ထားသော အလုပ်ရုံတွင် အလုပ် လုပ်ခဲ့ကြရသည်ပာု သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၎င်းတို့ကို အခြားမြန်မာ အလုပ်သမားများနှင့်အတူ သော့ခတ်၍ ပိတ်ထားပြီး လုပ်ခလစာလည်း မရရှိကြောင်း၊ လစာတောင်းသည့် အချိန်တိုင်း အရိုက်ခံရကြောင်း မြန်မာဆယ်ကျော်သက်များက ပြောကြားသည်။
၎င်းတို့အထဲမှ သတင်းရရှိပြီးနောက် အထည်အလိပ်စက်ရုံကို တရုတ်ရဲက ဝင်ရောက်စီးနင်းရာ တွင် နောက်ထပ် မြန်မာအလုပ်သမား ၅ ဦးကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အလုပ်သမားတွေရဲ့ နေရာကတော့ ကြောက်စရာပါ။ ရွှံ့တွေ၊ အမှိုက်တွေနဲ့ ဝက်တင်းကုပ်တစ်ခုလိုပါပဲပာု ရဲအရာရှိ ဝမ်ရှောင်ဂန်က သတင်းစာသို့ ပြောကြားသည်။
ရဲများ ရောက်မလာမီ စက်ရုံပိုင်ရှင် ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး ထိုအမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲပာု သိရှိရသည်။
ထူးထူးခြားခြား ၁၁ သုံးလုံး အခမ်းအနား (မောင်ဝံသ)
Eleven media group က ထူးခြားလှတဲ့ ၁၁-၁၁-၁၁ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ဆီဒိုးနားဟိုတယ်မှာ ဒီနေ့ညနေ ၆း ၃၀ နာရီက ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အနုပညာနယ်ပယ်တွေနဲ့ အလုပ်သမား လယ်သမားကိုယ်စားပြုသူတွေကို ဖိတ်ကြားတယ်။ ဇာဂနာ၊ မင်းကိုနိုင် မိခင်၊ ဌေးကြွယ်အစ်မတို့ကို စင်ပေါ်တင်ပေးတယ်။ Eleven Media Group Chairman and CEO ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်က မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများအတွက် ကိုယ့်နယ်ပယ်အသီးသီးကနေ စွမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေကို ဂုဏ်ပြုကြောင်း Key note speech ပြောသွားတယ်။
အခမ်းအနားကို NLD ခေါင်းဆောင် ဦးတင်ဦး အမှူးပြုတဲ့ ဗဟိုကော်မတီလူကြီးတွေ၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးက အဓိကခေါင်းဆောင်တွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရတယ်။ ဆီဒိုးနားခန်းမကြီး အပြည့်ပါပဲ။ တစည ခေါင်းဆောင်တွေ လဲ တွေ့ရတယ်။ ဒေါက်တာနေဇင်လတ်ကိုလဲ NLD ဦးဝင်းထိန်နဲ့ တစ်စာပွဲတည်းထိုင်လျက် တွေ့ရတယ်။
ဆရာမကြီး ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ကလဲ အသက် ၈၈ နှစ်နဲ့ မမျှ တက်ကြွတဲ့ မိန့်ခွန်းကို ပြောသွားတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ တက်ရောက်လာသူတွေကို ကြည့်ပြီး တအံ့တသြဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုလူတွေ ဒီလိုစုံအောင် စုစည်းပေးတာ၊ ဒီလိုလူတွေကို တန်ဖိုးထားပြီး ဂုဏ်ပြု ဖိတ်ကြားတာကို ပီတိဖြစ်နေမိပါတယ်။ တက်ရောက်လာသူတွေထဲက အများစုဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မကြာသေးမီအချိန်ကာလတစ်ခုအထိ ခုလို ဖိတ်ကြားဧည့်ခံခြင်းခံရဖို့ နေနေသာ၊ သူတို့နဲ့ စကားပြောမိရင်တောင် စာရင်းအတို့ခံရတဲ့ အခြေအနေ ရှိခဲ့သူတွေပါ။
မတွေ့ရတာ နှစ်ချီကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ မင်းကိုနိုင်မိခင် ဒေါ်လှကြည်နဲ့ မင်းကိုနိုင်ရဲ့အစ်မကို
ပြန်တွေ့ စကားလက်ဆုံကျရတဲ့အတွက် ကျွန်တော် အထူးဝမ်းသာမိပါတယ်။ NLD ဦးဝင်းထိန်က ထောင်ထဲက အထူးတိုက်မှာ သူရယ်၊ မင်းကိုနိုင်ရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ် ဘယ်လို နေခဲ့ ထိုင်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတာ ဒေါ်လှကြည်ကို ပြန်ပြောပြနေတယ်။
ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း၊ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ စမ်းချောင်း ကိုစိုးဝင်းတို့နဲ့ ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ ပြန်ပေါင်းထုပ်ကြဗျာလို့ ကျွန်တော်က ပြောတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ပြသနာမရှိဘူး၊ ခင်ဗျားသူငယ်ချင်းကို ပြောလေတဲ့။ NLD ဦးအုန်းကြိုင်ကို မေးငေါ့ပြတယ်။ ဦးအုန်းကြိုင်က ရယ်နေတယ်။ ကျွန်တော်က ခင်ဗျားတို့ မဟာမိတ် အရင်လုပ်ဗျာ၊ ပြီးတော့ Merger လုပ်၊ ပြန်ပေါင်းထုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ ကျွန်တော့် ဆန္ဒကို ဖွင့်ဟလိုက်ပါတယ်။
သင်္ကန်းကျွန်း ဦးသိန်းညွန့်က ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဆရာဖေမြင့်ကို ပြော တယ်။ ပြည်သူ့ခေတ်က သူ့ကို ဆော်လို့ အင်တာဗျူးတွေ မဖြေတော့ဘူးတဲ့။ ကျွန်တော်က သူ့ကို ကျောင်းတော်က ရန်စနဲ့ လုပ်နေတာလို့ သူက ထင်နေတယ်။ ကျွန်တော်က ပြည်သူ့ခေတ်မှာ ပါတဲ့ သတင်းတွေ ဆောင်းပါးတွေကို ကျွန်တော် ဘာမှ ၀င်မစွက်ဘူး၊ သူ့သတင်းပါတဲ့ကိစ္စဆိုရင် ကျွန်တော် သိတောင်မသိလိုက်ပါဘူးလို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှင်းလိုက်ရတယ်။ ဆရာဖေမြင့်ကလဲ ဟုတ်မှန်ကြောင်းထောက် ခံတော့မှ ဦးသိန်းညွန့် ကျေနပ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်က ဦးသိန်းညွန့်ဟာ နိုင်ငံရေးသမားပီပီသသ အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်၊ သူ့နမူနာကို ကျန် နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပါ လေ့လာသင့်တယ် လို့တောင် ပြောဖူးကြောင်း ဆရာဖေမြင့်ကပြောပြတော့ ဦးသိန်းညွန့် ဘ၀င်ကျသွားပုံရတယ်။ အေးဗျာ ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ဒီနေ့ည အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဖြစ်သွားပြီ၊ နောင်ဆို ပြည်သူ့ခေတ်က မေးရင် ကျွန်တော် ဖြေတော့မယ်လို့ ပြောသွားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ခေတ်က တကသအမှုဆောင်၊ ဗကသ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘိုကလေးကိုလှရွှေနဲ့လဲ စကားပြောရတယ်။ သူလိုလူကို ရှာဖွေဖိတ်ကြားတာ ကျွန်တော်က အံ့သြ ၀မ်းသာနေ တယ်။ ကြေးမုံဦးစိုးနိုင်ရဲ့သား ကိုမောင်မောင်နိုင်က ဒီလိုလူတွေကို ဖိတ်ကြားဖို့ အကြံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ သိတော့မှ နားလည်တော့တယ်။
ကိုလှရွှေက ကျွန်တော့်ကို လတ်တလော နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ ဆွေးနွေးချင်နေတယ်။ ကျွန်တော်က သူ့ဆီက ကျွန်တော်တို့ခေတ် ကျောင်းသားသီချင်းတွေ အသံသွင်းယူဖို့ ကိစ္စ ပိုပြီး စိတ်စောနေတယ်။ ကိုမြတ်လေးအများဆုံးရေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂသီချင်းတွေ၊ တပ်ဦးသီချင်းတွေ၊ ၁၃၀၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံ သီချင်းတွေအားလုံးကို ရတဲ့လက်ကျန်ဆိုလို့ ကိုလှရွှေနဲ့ ကိုဖေအောင်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ကျွန်တော်က သူတို့ဆီက စာသားတွေသာမက တေးသွားသံစဉ်ပါအသံသွင်းထားချင်တာ။ ဒီလူတွေ က ပြောလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး၊ နေ့မြင်ညပျောက်။
၁၉၈၉-၉၀ အင်းစိန်မှာကတည်းက ဘေးအခန်းကနေ ကိုလှရွှေကိုဆိုခိုင်းပြီး ကျွန်တော် ပြန်နွှေးပေမယ့် ကျွန်တော်က စာသားတချို့တော့ ရပါရဲ့၊ မယ်လိုဒီတွေ မရဘူး။
ည ၉နာရီခွဲလောက်မှာ ပွဲပြီးသွားပေမယ့် ကျွန်တော် မပြန်ဖြစ်သေးဘူး။ ဒီလောက် မင်းပေါင်းစုံတဲ့ ပရိသတ်ကို ထိုင်ကြည့်နေမိတယ်။ အထူးသဖြင့် ၈၈ မျိုးဆက်တွေ။ သူတို့တွေဟာ အသက် ၄၅နဲ့ ၅၀ကြားရှိရော့မယ်။ သူတို့တွေဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရေးတာဝန်ယူမယ့်သူတွေပဲလို့ ကျွန်တော် ယုံကြည် တယ်။ ထောင်ထဲက မကြာခင်ပြန်ထွက်လာကြမယ့် ၈၈ မျိုးဆက်တွေနဲ့ သူတို့ ပေါင်းစည်းမိ သွားရင် လေးစားခန့်ညားလောက်တဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားကြီး ဖြစ်သွားမယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်နေတယ်။
11: 29 PM.
ကလေးငယ် ဆယ်ဦးကျော်အား ရောင်းစား ခဲ့သော နိုင်ငံခြားသားကို အရေးယူ
မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်ရေး လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုမှ နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်း တစ်ဦးက ရှမ်းပြည်နယ်မှ ကလေးငယ် ၁၆ဦး ခန့်အား တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ရောင်းစားခဲ့သော လူကုန်ကူးမှုအား အရေးယူ နိုင်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှု တားဆီး နှိမ်နင်းရေး အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက7Day News သို့ပြောကြားသည်။
၂၀ဝ၉ ခုနှစ် အတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် Save the Children NGO အဖွဲ့မှ နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်း တစ်ဦးသည် ၄င်း တို့အင်န်ဂျီအို အဖွဲ့ တာဝန်ကျသည့် ရှမ်းပြည်နယ် နမ့်ခမ်းမြို့နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်မှ လူငယ်၁၆ဦး ခန့်အား မူဆယ်မြို့မှတစ်ဆင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လူငယ် အများစုမှာ အသက်၁၈ နှစ်အောက်များသာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထိုကြောင့် ယင်းပြစ်မှုမှ တရားခံ ဩစတြေးလျ နိုင်ငံသား ဝန်ထမ်းအား လူကုန်ကူးမှု ဥပဒေပုဒ်မ (၂)ခုဖြင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၄င်း၏နိုင်ငံသို့ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အတွင်းက လွှဲ ပြောင်းပေးအပ်လိုက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်း ရေးအဖွဲ့မှ ရဲမှူးကြီးညွှန့်လှိုင်က ပြောသည်။ထိုသတင်း အား 7Day News Journal ဖော်ပြပါရှိသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, November 11, 2011
ဘာလီကျွန်းတွင် ထိပ်သီးညီလာခံအတွက် အာရှခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ ရုရှား ခေါင်းဆောင်များ စုဝေးကြမည်
(VOA News မှ9Nov 2011 ရက်စွဲပါ US, China , Russia to goin Asian Leaders for summit in bali သတင်းဆောင်းပါးကို yangonchronicle မှ ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
လာမည့်သီတင်းပတ်(နိုဝင်ဘာ ၁၄ - ၁၉)တွင် ၁၈ နိုင်ငံမှခေါင်းဆောင်များသည် ၆ ကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးညီလာခံ တက်ရောက်ရန်အတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းပေါ်တွင် စုဝေးကြတော့မည် ဖြစ်သည်။
ဒေသတွင်း စီးပွားရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲဖိုရမ်သည် ယခုနှစ်ပိုင်းများအတွင်း အရေးပါမှု မှန်မှန်တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ရုရှားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ ခေါင်းဆောင်များ ပထမဆုံးအကြိမ် ပါဝင်လာမည် ဖြစ်သည်။
အိမ်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်သော အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ အင်ဒိုနီးရှားကလည်း ၎င်း၏ ယေဘုယျဆန္ဒတူညီမှု တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် ညီလာခံ၏ ဂုဏ်သတင်းကို မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်းက သမိုင်းဝင်ဟိန္ဒူ-ခမာ ဘုရားကျောင်းအနီးတစ်ဝိုက် နယ်စပ်အငြင်းပွားမှုကြောင့် ထိုင်းနှင့် ကမ္ဘောဒီယားအကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားရာတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာတီနာတာလီဂါဝါက အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကဏ္ဍမှနေ၍ ဖြန်ဖြေပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါနှစ်နိုင်ငံအကြား လွန်းပြန်ကူးသန်းညှိနှိုင်းပေးနေသော လပိုင်းများအတွင်း နာတာလီဂါဝါက အာဆီယံအဖွဲ့၏ ယေဘူယျသဘောထား တည်ဆောက်ခြင်းနည်းလမ်းကို ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံရေးစီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်မှုဖြင့် ခြိမ်းခြောက်၍မရခြင်းက မိမိ၏လုပ်ငန်းကို ပိုမိုခံစား စေကြောင်း ဝန်ခံပြောကြားခဲ့သည်။
ဒစ်ပလိုမေစီ(Diplomacy)နဲ့ ဖိအားပေးလို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် Sanctions တွေနဲ့လည်း တွန်းအားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြင်ကြရမှာပါ။ အခုဒိုင်လူကြီးက အပြင်ထွက်ပေးနေရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘက်ကိုလည်း နည်းနည်းလောက် ပြန်စဉ်းစားပြီး ကျွန်တော်တို့အာဆီယံရဲ့ နေရာဘယ်မှာ လဲလို့ သုံးသပ်ကြပါဦးဟု နာတာလီဂါဝါက ပြောဆိုခဲ့သည်။
အငြင်းပွား ၂ နိုင်ငံအကြားအပတ်အခေတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် ရရှိအောင် နာတာလီဂါဝါ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း အငြင်းပွား ဇုံအတွင်း အင်ဒိုးနီးရှား ငြိမ်းချမ်းမှု ထိန်းသိမ်းရေးတပ်များ စခန်းချရန် တောင်းဆိုသည့် အစီအစဉ်ကိုမူ လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။
ယခုအခါ ကမ္ဘာ့လူဦးရေထက်ဝက်ခန့်နှင့် မြန်ဆန်စွာကြီးထွားနေသော စီးပွားရေးနိုင်ငံများစွာ ပါဝင်သောဒေသအတွက် အရေးပါမှု ပိုလာသော အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးညီလာခံနှင့် အာဆီယံဖိုရပ်ကို အဆိုပါ ဒစ်ပလိုမေစီကပင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
အာရှပစ္စဖိတ်ဒေသသည် လာမည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း အမေရိကန် အကျိုးစီးပွားများအတွက် အလားအလာနှင့် အရေးပါမှု အရှိဆုံး ဒေသတစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများက အမြဲတစေ ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ဇူလိုင်လက နောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့သော အာဆီယံဒေသတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ထိပ်သီးညီလာခံတွင် နာတာလီဂါဝါက ရေနံကြွယ်ဝသော တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင် ပြဿနာဖြေရှင်းရန် တရုတ်နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံ များအကြား သဘောတူညီမှုရရှိခြင်းကို ကြိုဆိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် အဆိုပါ သဘောတူညီချက်သည် “သဘောတူညီမှု ရရှိနိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ၂ ဖက်စလုံးကို တောင်းဆိုထား ခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ညီလာခံ အဝန်းအဝိုင်းတွင် တောင်နှင့်မြောက်ကိုရီးယားတို့မှ တာဝန်ရှိသူများအလွတ် သဘောတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ပြုံးယမ်း၏ နျူကလီးယားအစီအစဉ်နှင့်ဆိုင်သော ၆ နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲပြန်လည် စတင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို အစပျိုးပေးလျက်ရှိသည်။
အင်ဒိုနီးရှားဒုတိယသမ္မတ၏ နိုင်ငံရေးလက်ထောက်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒီဝီဖော်ကျူနာအန်နဝါက “အာဆီယံ ထိပ်သီးညီလာခံများသည် မြေစမ်း ခရမ်းပျိုး သဘောတူညီချက်အဆင့်မျှသာ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သေးသော်လည်း ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ထိမ်းသိမ်းရာတွင် အရေးကြီးသော ကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်ဟု ပြောကြားသည်။
“အလွန်ဆုံး လုပ်နိုင်တာကတော့ တင်းမာမှုကို ဖြန့်ထုတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားတာပါ။ ဒါဆိုရင် ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေအကြား ဆက်နွယ် ပတ်သက်မှုတွေ ရှိလာအောင် ဖန်တီးနိုင်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ မျှော်လင့်နိုင် ပြီပေါ့။ ဒီလိုဆိုရင် ပြိုင်ဖက်ရန်သူတွေလို ဆက်ဆံ နေတာထက် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ နည်းလမ်းကို တွေ့လာကြမှာပါ”ဟု အန်နဝါက ပြောကြားသည်။
၂၀၁၄ တွင် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူရန် မြန်မာတို့ကြိုးပမ်းနေသော ကိစ္စသည်လည်း အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးညီလာခံ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်လာဖွယ်ရှိသည်။
မနှစ်က ရွေးကောက်ပွဲများအပြီး ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်၍ အကောင်အထည်ဖော်လာခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို လွှတ်ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ကို လွှတ်ပေးခြင်းတို့အတွက် ဆုလာဒ်အဖြစ် ခြွင်းချက်သတ်မှတ်ထောက်ခံမည်ဟု အာဆီယံက ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားသည်။
လူ့အခွင့်အရေးအုပ်စု အချို့ကမူ “အာဆီယံသည် အဖွဲ့၏ ကိုယ်ပိုင်ဟန် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး စည်းကမ်းများကို မြန်မာနိုင်ငံ လေးစားလိုက်နာလာအောင် ခပ်မာမာဆက်ဆံ၍ ဖ်ိအားပေးသင့်ကြောင်း” တိုက်တွန်း ပြောဆိုလျက်ရှိသည်။
အန်နုဝါ က ဆက်လက်၍ “အာဆီယံသည် ၂၀၀၅ တွင် ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး စည်းမျဉ်းများကို စတင်ချမှတ်မည့် ဒေသတွင် ပေါင်းစည်းမှု အဖွဲ့ကြီး ဖြစ်လာအောင် ဦးတည်နေခြင်းကြောင့် ယခုအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းမှုကို ထောက်ခံခြင်းသည် အာဆီယံအဖွဲ့၏ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အန္တာရာယ်ကြီးသည်” ဟု သုံးသပ်ပြော ကြား သည်။
“တကယ်လို့ အရေးပါတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ မလုပ်ဘူးဆိုရင်၊ ဒါမှမဟုတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ နောက်ပြန် ဆုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အာဆီယံအသိုင်းအဝိုင်း ပေါင်းစည်းမှု မတိုင်မှီ တစ်နှစ်အလို ၂၀၁၄ မှာ အာဆီယံကို မြန်မာဦးဆောင်တဲ့ကိစ္စဟာ အာဆီယံကို လူထုဆက်ဆံရေး ကဏ္ဍမှာ ဂုတ်သိက္ခာညစ်နွမ်းကျဆင်းမှု ကပ်ဘေးသင့်အောင် ဆိုးကျိုးပေးမယ့် အလားအလာများနေပါတယ်” ဟု အန်နုဝါက ဆိုပါသည်။
သို့သော်လည်း ဒေသတွင်း စီးပွားရေး ကြီးထွားနေသည့် ယခုကဲ့သို့ကာလမျိုးတွင် အာဆီယံပုံစံ၊ အာဆီယံ ဟန်ပန်ဖြင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုး စီးပွားများကို အာရုံစိုက်ခြင်း၊ အားပေးတိုက်တွန်းခြင်း၊ ယေဘူယျတူညီမှုကို အချိန်ယူ တည်ဆောက်ခြင်းတို့သည် ဒေသ၏ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေမည့် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟု သူမက မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုသွားသည်။
နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဥရောပသမဂ္ဂဝန်ကြီးတစ်ဦး မြန်မာသို့ လာရောက်မည်
၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံအား စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုပြုခဲ့သည့် ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ အဆင့်မြင့်ဝန်ကြီးတစ်ဦး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် ဥရောပသမဂ္ဂအဆင့်မြင့် ဝန်ကြီးမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဌာန(DFID) မှ အတွင်းဝန် အယ်(န်)ခြူးမစ်ချယ်(လ်) ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၎င်း၏မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်သည် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် ဗြိတိသျှသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဥရောပသမဂ္ဂအဆင့်မြင့်ဝန်ကြီးဖြစ်သူ အယ်(န်)ဒြူးမစ်ချယ်(လ်)၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်သည် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မျ ၁၇ ရက်နေ့ထိတိုင် သုံးရက်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရန် အဓိက ရည်ရွယ်၍ လာရောက် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်း ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နေပြည်တော်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် အဆင့်မြင့် မြန်မာဝန်ကြီးများ အပြင် အခြားတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မန္တလေးနှင့် မန္တလေးအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ စီမံကိန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် သည့် အယ်(န်)ဒြူးမစ်ချယ်(လ်)မှ သွားရောက်လေ့လာမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့်အတူ ပြင်ပမီဒီယာများ ဖြစ်သည့် ဒေးလီးတယ်ရီဂရပ် သတင်းစာနှင့် ဘီဘီစီတို့မှ သတင်းထောက် တစ်ဦးစီ လိုက်ပါလာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန(DFID) သည် ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအား ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရာတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအား လာမည့် လေးနှစ်တာကာလအတွင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်းသုံးရာခန့် ကူညီထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ထိုသတင်းအား နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဥရောပသမဂ္ဂဝန်ကြီးတစ်ဦး မြန်မာသို့ လာရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း7Day News Journal တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
MICB ဘဏ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ကျပ်သိန်း ၉၀ ကျော် အလွဲသုံးစားလုပ်
မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် (MICB) မှ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ချက်လက်မှတ်များတွင် စာရင်းပိုင်ရှင်များ ၏ နာမည် ဖြင့် ငွေ 91 သိန်းကျော်ကို လိမ်လည် ထုတ်ယူခဲ့ကြောင်း စုံစမ်း တွေ့ရှိရသဖြင့် ဗိုလ်တထောင်ရဲ စခန်းတွင် အမှုဖွင့် အရေးယူ ထားကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှသတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ ဘဏ်ဝန်ထမ်းသည် လက်ထောက်မန်နေဂျာ အဆင့်ရှိသူဖြစ်ပြီး ချက်လက်မှတ်များတွင် စာရင်းပိုင်ရှင်များ၏ လက်မှတ် အတုများရေးထိုးပြီး တံဆိပ်တုံးအတုများကိုအသုံးပြုကာ ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဌာနမှ လိမ်လည်ထုတ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ ထိုသို့ ထုတ်ယူခဲ့ခြင်း ကို ဘဏ်၏ ဌာန ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါဝန်ထမ်းကို အရေးယူရန် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေပြီး ဗိုလ်တထောင်ရဲစခန်းတွင် (ပ)၁၄၈/၂၀၁၁၊ ပုဒ်မ-၄၂၀/ ၄၆၈ ဖြင့် အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်နေသည်ဆိုသောသတင်းအား 7Day News Journal တွင်ဖော်ပြပါရှိပါသည်.။
၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့။ ပြည်သူတို့၏ တစ်ထစ်ချ ယုံကြည်မှုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် လွတ်လာမည်။ ညနေ ၄ နာရီ ကျော်ကျော် ခန့်တွင် တက္က သိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ သံဆူကြိုး အကာအရံများ ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီ ဆိုသောသတင်းက မျှော်လင့် ချက်တို့ကို ရင်ခုန်လှုပ်ရှားသွား စေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်အထိ ရွှေဂုံတိုင် တွင်ရှိနေသောလူစုက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ရောက်လာမည်ကို ယုံကြည် ၍ ဆက်လက် စောင့်ကြိုနေခဲ့သည်။ သံဆူးကြိုးများ ဖယ်လိုက်ခြင်း နှင့်အတူ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းရှိ ခြံဝင်းအတွင်းမှ သွက်လက်လှုပ်ရှား သောခြေလှမ်းများဖြင့်ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ထွက်ပေါ်လာသည်။
ကျန်းမာပါစေ … ကျန်းမာပါစေ။ ယင်းသို့ ဟစ်ကြွေးသံများနှင့်အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခြံဝတံခါး ထက်ရောက်ရှိလာသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မေတ္တာ၊ ပြည်သူ၏ မေတ္တာတွေ ပေါင်းကူးကာ မျှော်လင့်ချက်
တို့ ဖြေဆည်ခဲ့ ကြသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တကယ် လွတ်လာပြီ။ သို့သော် မချင့်မရဲ စိတ်ရှိသူတို့က တကယ်မှ ဟုတ်ရဲ့ လား။ အိပ်မက်လေလား။ တချို့က ပြန်သော်လည်း အများစုက မပြန် လို ကြသေး။ သူတို့ ရင်ခုန်နေသည်။ ပျော်ရွှင်နေသည်။ ဝမ်းသာ မျက် ရည်ဖြင့် ခံစားချက်တွေ ဖလှယ် ကြသည်။
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် နေ့ ယမန်နေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက သူမ ယနေ့ ၁၂ နာရီ တွင် ရွှေဂုံတိုင်၌ ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့မည်ဟု ပြောကြားလိုက်သဖြင့် နံနက် ၇ နာရီခန့်ကတည်းက တဖွဲဖွဲ ရောက်လာသည်။ သူမ မိန့်ခွန်း စပြောချိန်တွင် သောင်းနှင့်ချီသော လူအုပ်ကြီးက ရွှေဂုံတိုင် လမ်းမကြီး ပေါ်၌ ကြက်ပျံမကျ စည်ကား ၍ နေသည်။ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သားငယ် ကင်မ်အဲရစ်(ခ)ကိုထိန်လင်း မိခင်ထံရောက်လာသည်။ နှစ်ပတ်ကြာ မိခင်နှင့် နေထိုင် သွားသည်ဟု သိရသည်မှအပ အခြားသတင်း အစအနမှ မရ။ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်၊ ဧပြီ၊ မေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် လှုပ်ရှားမှု တို့ကို ပြည်သူတွေ ဆက်တိုက် နားစွင့်လို့ နေသည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ မွေးနေ့။ သူမ၏ သားငယ် ကင်မ်အဲရစ် (ခ) ကိုထိန်လင်း ဒုတိယအကြိမ် ရောက်ရှိလာသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ သား နှင့်အတူ ချစ်သောသူများ သမိုင်းဝင် ပုဂံသို့ ဘုရားဖူးသွားကြသည်။ ထိုလ အတွင်း ဘာသာရေး အလေးထား သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သီတဂူ ဆရာတော်နှင့်ပါ တွေ့ဆုံ၍ ဖူးမြော်ကန်တော့ အဆုံးအမ နာယူခဲ့သည်။ ထိုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် အားလုံးက မမေ့နိုင်သော အာဇာ နည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ။ ယင်း အကြောင်းအရာနှင့်အတူ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်၏ ပုံရိပ်တို့ ပြည်သူနှင့် အနီးကပ်ပြန်လည် ထိတွေ့မိပြန်သည်။
၉ နှစ်တာကာလအတွင်း အာဇာနည် ကုန်းသို့တက်၍ ကွယ်လွန်သူ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်များအား ဂါရဝပြု လွမ်းသူ့ ပန်းခွေ ချသည်။ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့။နေအိမ် အကျယ်ချုပ် လွတ်မြောက်ပြီးနောက် အစိုးရသစ်၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် နှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည် တွေ့ဆုံခဲ့မှုသည် ထင်မှတ် မထား သော ပထဆုံး ဆုံချက်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ ဒုတိယအကြိမ် ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် ပြန်လည် တွေ့ဆုံ သည်။
သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးမြို့သို့ ခရီးသွား၊ စာကြည့်တိုက် ဖွင့်ပွဲတက်၊ ရေဘေး ဒုက္ခသည် စခန်းသို့သွား၊ ထို့နောက် ဘုရားဖူး သည်။ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ အား လုံး မျှော်လင့်မထား မှင်တက် သွားစေသောအကြောင်းအရာတစ်ခု ပေါ်လာသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်နှင့် အစိုးရသစ်၏ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ နေပြည်တော် တွင် တွေ့ဆုံသည်။ တိုင်းပြည်တစ်ခုထဲမှာ အမိုးတစ်ခုရဲ့အောက်မှာ ယင်းသို့ အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူရနိုင်သော မြင်ကွင်းမျိုး။ မယုံတစ်ဝက်ယုံ တစ်ဝက်။ အိပ်တစ်ဝက် နိုးတစ်ဝက် အိပ်မက်လေလား။ နေပြည်တော်၌ ရှိနေစဉ် ပထမဆုံးအကြိမ် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပါ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂမှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မစ္စ တာကွင်တားနားနှင့်တွေ့ဆုံမှုအပါအ ဝင် ယခုလအတွင်း သံတမန်အချို့ နှင့်တွေ့ဆုံမှု များသည် ပိုမိုပွင့်လင်း လာပြန်သည်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ။ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှုတို့၏ အရိပ် အယောင်တစ်စတစ်စ ပိုမိုထင်သာ လာသည်။ အချို့က တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများကို မြန်ဆန်၍ စိုးရိမ်ရ သည်ဆိုသည်။ အချို့က တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုပြုသည်များ နှေးကွေး သည်ဆိုပြန်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူလူထုက ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည်အား မီဒီယာမှတစ်ဆင့် သူမ ၏ ခံယူချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု ထင် သာမြင်သာရှိလာခြင်းကို ပို၍ပို၍ မျှော်လင့်လာကြပြီး အနောက်အုပ်စု အပါ အဝင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်း အဝိုင်းနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည် များသထက် များလာသည်။
စက် တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက် အထိ ပထမဆုံးအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံ လာရောက်သော အမေရိကန်အထူး ကိုယ်စားလှယ် ဒဲရစ်မစ်ချယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံ ပြီး ယခုလအတွင်း ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက စိုးရိမ်ကြောင့်ကြနေ သော ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား ရပ်တန့်ပေး ရန် ပြည်သူနှင့်တစ်သားတည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထူးထူးခြားခြား ဧရာဝတီနှင့်ပတ်သက်သော ပြပွဲနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ၈ ပွဲပြုလုပ်ရာ ဖိတ် ကြားသမျှပွဲတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ မီဒီယာစာမျက်နှာများပေါ်၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အင်တာ ဗျူးများဝေဝေ ဆာဆာဖော်ပြ လာသည်။ ထိုကာလတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများနှင့် နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းပေါ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မှတ်ချက်က ”တိုင်းပြည်အတွက်အသုံးချတယ် ဆိုရင်လည်း အသုံးချပေါ့၊ ရပါတယ်” ဟု အရိုးသားဆုံး ခံယူချက်။ စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက် နံနက်ပိုင်း ကတည်းက ကြားရသော ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ရပ်နားသတင်းနှင့် အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်တို့၏ တတိယ အကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံမှု။ ယင်းနေ့ သည် မင်္ဂလာရှိသော ပြည်သူတို့ စိတ်နှလုံးအေးချမ်းခဲ့သော နေ့ တစ်နေ့ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံခဲ့ ပြီ။ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတို့၏ ထုတ် ပြန်ချက်များ ထင်သာမြင်သာမရှိ သည့်တိုင် ယခုကာလ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်၏ လှုပ်ရှားမှုတို့က လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ရေး။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူး ချုပ်၏ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဗီဂျေး နမ်ဘီးယားတို့အပြင် မလေးရှားဝန် ကြီးချုပ် ဟောင်း တွန်ဒေါက်တာ မဟာသီယာမိုဟာမက်။ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်မှ ၄ ရက်အတွင်း လာရောက် သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒဲရစ်မစ် ချယ်နှင့် အမေရိကန် ဒီမိုကရေစီ လူ့အခွင့် အရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ကယ်အိုစနာတို့နှင့်ပါ တွေ့ဆုံခဲ့ သည်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက် နေ့ထိုနေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် လွတ်မြောက် ခြင်း တစ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်မည် ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်တာ ကာလ အတွင်း လွတ်မြောက်ပြီးချိန်၌ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအငြိမ်းစားပင်စင် လစာ များ တိုးမြှင့်ရရှိမှု ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့၌ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အကျဉ်းထောင် ၄ဝ ကျော်နှင့် အလုပ်စခန်း ၁ဝဝ ကျော်မှ အကျဉ်း သား ၁၄၆ဝဝ လွှတ်ပေးမှု၊ သေဒဏ် ကျ အကျဉ်းသား ၃၄၈ ဦးအား ထောင်ဒဏ်တစ်သက် လျှော့ပေါ့မှု နှင့် အကျဉ်းသားအားလုံးကို အပြစ်ဒဏ် တစ်နှစ်လျှော့ချပေးမှု၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းထားမှု၊ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျ ခံနေရသူ ၃ဝဝ ခန့်အပါအဝင် ကျန်းမာရေးမကောင်းသူ အကျဉ်း သားများ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ယုံကြည်ချက်နှင့်အတူ အ ကြောင်း ကြောင်းကြောင့် တိုင်းတစ်ပါးရောက် နေသူများအား ပြန်ဝင် ခွင့်ပေးခဲ့သလို နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်က ကြိုးနီစနစ်ကိုင်ဆွဲသူနှင့် အဂတိ လိုက်စားသူများအား အရေးယူရန် မိန့်ခွန်း၊ အစိုးရသစ်လက်ထက် ကုန်သွယ်ခွန်နှင့် ဝင်ငွေခွန်များ လျှော့ချပေးမှု၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ များနှင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးလဲလှယ် ပုံ ပြောင်းလဲမှု၊ အသေးအဖွဲဟု ထင်ရသော နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီ ICRC အဖွဲ့ ၂ဝဝ၅ နောက်ပိုင်း ယခု နှစ် ဇူလိုင်လတွင် အကျဉ်းထောင်များ အတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိမှု၊ အရာအားလုံးသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန် ၏ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် သန့်ရှင်းသော အစိုးရမိန့်ခွန်းမှစ၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကြိုးပမ်းမှု တို့က မဏ္ဍိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်လွတ်မြောက် ပြီး တစ်နှစ်တင်းတင်းပြည့် ပြီးရက် ပထမဆုံးနေ့ရက်။ ဆက်လက် မျှော်လင့်နေကြသည်ဟု ယုံကြည်သည်။
သတင်းရင်းမြစ်.. Popular News
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, November 10, 2011
အလတ်စား ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၃ ခုအတွက် တရုတ်-မြန်မာ သဘောတူ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည် မြောင်း ဝန်ြကီး ဌာနမတှ ညေ် ဆာက် ပြီးဖြစ်သည့် ဆည်တာတမံ ၃ ခု တွင် အလတ်စား ရေအားလျှပ် စစ်စက်ရုံများတည်ဆောက်ရန်အ တွက် ဒီဇိုင်းပုံစံများ တာဝန်ယူ တွက်ချက်ပေးရန် သဘောတူစာ ချုပ်ကို ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနနှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဒီဇိုင်းဌာနတို့ ပြီးခဲ့ သည့်လက ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်း ယခု ပတ်ထုတ် လယ်ယာစီးပွား စာ စောင်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ် ရန် စီစဉ်နေသည့် ရေလှောင်တမံ များမှာ မြန်အောင်မြို့အနီးရှိ ကညင်ရေလှောင်တမံ ၊ ဖောင်ကြီး မြို့အနီးရှိ ငမိုးရိပ်ရေလှောင် တမံ နှင့် သာယာဝတီမြို့အနီးရှိ သုံး ဆယ်ရေလှောင်တမံတို့ဖြစ်ပြီး ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဆည်မြောင်းတာတမံ စီမံကိန်း ၃၇၁ ခုကို တည်ဆောက်ထိန်း သိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဆည်တာတမံတစ်ခုစီတွင် နှစ်မဂ္ဂါဝပ်ခန့်စက်နှစ်လုံးစီတပ် ဆင်တည်ဆောက်သွားမည့်ယင်း အစီအစဉ်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ က ကူညီထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း အဆိုပါ အလတ်စား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ တည် ဆောက်ရေးအတွက် ကုန်ကျစရိတ် အနေဖြင့် လောလောဆယ်တွင် တရုတ်ယွမ်သန်း ၂၆၀ ခန့်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားကြောင်းလည်း ယင်းစာစောင်တွင်ပင် ဖော်ပြ ထားသည်။ တည်ဆောက်ပြီး ဆည်တာ တမံများမှ ဆည်ရေပေးဝေခြင်း အ ပြင် ရေအားလျှပ်စစ်ကိုပါ ပူးတွဲ ထုတ်လုပ်သွားရန် အတွက် လိုအပ် သည့်ဒီဇိုင်းပုံစံများ ရေးဆွဲခြင်းကို China Water Resources Bei fang Inves t igat ion Design and Research ကုမ္ပဏီ က တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွား မည်ြဖစ်ြပီး ရေအားလျှပ်ပစ် စက်ရုံ ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကို တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ ကူညီမည်ဖြစ် ကာ ဆည်မြောင်းဦစီးဌာနက မြို့ ပြတည်ဆောက်ခြင်းများ တာဝန် ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ထိုသတင်းအား 7Day News Journalတွင်ဖော်ပြပါရှိပါသည်.။
ကိုဇာဂနာ၏ မြပုဏ္ဍမာအငြိမ့်ကို ဒုတိယအကြိမ် အဖြစ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ မေရီလန်းတွင် ကပြဖျော်ဖြေရန် အစီအစဉ်ရှိ
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကိုသူရ(ခေါ်) ဇာဂနာသည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်ပို့စ်ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေပါက ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ မေရီလန်း၌ မြပုဏ္ဍမာ အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများနှင့်အတူ အငြိမ့် သွားရောက်ကပြ ဖျော်ဖြေရန်အစီအစဉ်ရှိကြောင်း အဆိုပါ အငြိမ့်အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများထံမှ သိရှိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ မေရီလန်းတွင် ကပြဖျော်ဖြေမည့် မြပုဏ္ဍမာအငြိမ့်ကို ရံပုံငွေအတွက်ရှာခြင်း မဟုတ် သောကြောင့် လာရောက်ကြည့်ရှု့သူ မြန်မာပရိတ်သတ်အပါအ၀င်များကိုလည်း ၀င်ကြေးအခမဲ့ဖြင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် သွားရောက်ဖျော်ဖြေရခြင်းသည် ပြည်သူအတွက် အများကောင်းကျိုး အတွက် ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့် သွားရောက်ဖျောဖြေခွင့်ရခြင်းကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ် ရကြောင်း မြပုဏ္ဍမာ အဖွဲ့ဝင်များထံမှ သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ အခုလို ပြည်ပမှာ သွားရောက်ဖျော်ဖြေခွင့်ရတာ ၀မ်းသာပါတယ် ဒါကလည်း ပြည်သူအတွက် အများအတွက် တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်တာဆိုတော့ ကောင်းတဲ့အလုပ်မို့လို့ လုပ်တာပါ”ဟု မြပုဏ္ဍမာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုအရိုင်းက ပြောသည်။
ကိုသူရ(ခေါ်) ဇာဂနာဦးဆောင်သော မြပုဏ္ဍမာအငြိမ့်သည် ၁၉၈၆ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့အသံ၌ ပထမဆုံး စတင်ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး ၂၅ နှစ်ကြာမှ ဒုတိယအကြိမ်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတွင် ကပြဖျော်ဖြေမည့် အငြိမ့်ပွဲဖြစ်သည်။
မြပုဏ္ဍမာ အငြိမ့်ကို တတိယအကြိမ်တွင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အောင်ဆန်းကွင်း သို့မဟုတ် သုဝဏ္ဍမိုးလုံ လေလုံတွင် ဇန်န၀ါရီလ ၄ရက်နေ့တွင် ကပြဖျော်ဖြေရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်းကိုလည်း မြပုဏ္ဍမာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုကင်းကောင်ထံမှ သိရှိရသည်။
သတင်းများ ပြန်လည်ဝေမျှပေးသော မြစ်မခမီဒီယာအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းရာဒေသမှ ဒေသခံတောင်သူများ လျော်ကြေးထက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခွင့်ကို ပိုမိုလိုလားကြောင်း
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိ ဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းရာဒေသမှ ဒေသခံတောင်သူများအနေဖြင့် ရရှိသော လျော်ကြေးထက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခွင့်အားပိုမိုလိုလားကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ကျောက်ဖြူ-ကူမင်းဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတွင်ပါသည့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက် ပိုင်းတွင် လျော်ကြေးပထမအဆင့် ပေးဆောင်ပြီးဖြစ်၍ အချို့နေရာများတွင် ပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းမှု လုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာ နစ်နာကြေးရရှိသူများထဲမှ တစ်ဦးအပါအ၀င် ဖြစ်သည့် မနန်းက ယခုကဲ့သို့ ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့မှ သွယ်တန်းမည့် ဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မကွေးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့ကို အဓိကဖြတ်သန်း၍ တရုတ်ပြည် ကူမင်း မြို့တော်အထိ သွယ်တန်းမည်ဖြစ်သည်။
“ဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်းတွေ နေရာချပြီးတော့ စတင်သွယ်တန်းနေပါပြီ၊ လျော်ကြေး တစ်ဝက်ကိုလည်း ရထားပြီးပြီ၊ အခု လယ်ရိတ်နေတယ်၊ နစ်နာကြေးထက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခွင့်ကိုပဲ တောင်သူတွေ အနေနဲ့ ပိုလိုချင်ကြတယ်”ဟု နောင်ပိန်ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဂေါ်ရခါးလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးဒန်ဘီဒိုင်းက ပြောသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကြွက်နဖား တောင်ခြေမှ စတင်သွယ်တန်းကာ ရှမ်းရိုးမတောင်တန်းပေါ်သို့ သွယ်တန်းလာသည့် ဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းတွင် ပိုက်လိုင်းနေရာချထားမှုနှင့် ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းမှုလုပ်ငန်းများအား စတင် ဆောင်ရွက် နေကြောင်း CNPCကုမဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။ှ
“ပိုက်လိုင်းတွေကို သတ်မှတ်နေရာတွေမှာ စုပုံထားပြီးတော့ ကရိန်းတွေနဲ့ စတင်သွယ်တန်းနေပါပြီ၊ အခု နောင်ပိန်မြို့နယ်ထဲမှာ သွယ်တန်းနေတာပါ၊ စခန်းသာနဲ့နားအိုက်ပန်ကျေးရွာကြားမှာ ဋ္ဌာနေစခန်း တစ်ခု သတ်မှတ်ထားရှိပါတယ်”ဟု တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြိးမားဆုံးကုမဏီတစ်ခုဖြစ်သော China National Petroleum Corporation မှ ရှမ်းပြည်နယ်အတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံလောင်စာစွမ်းအင်ရရှိရေးဖြစ်သည့်အတွက် နစ်နာကြေးများ ပေး ဆောင်၍ အလျင်အမြန်ပြီးစီးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း မာဒေးကျွန်း၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ရျမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် ပိုက်လိုင်းချခြင်းနှင့် သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ထိုစီမံကိန်းကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတွင် ကျေးရွာများပြောင်းရွေ့ခံရမှု၊ ဥယာဉ်မြေနှင့် လယ်မြေ များအား အဓမသိမ်းယူမှု၊ လုပ်အားခများခေါင်းပုံဖြတ်မှုများ ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသောကြောင့် လူ့အခွင့် အရေးချိုေးဖာက်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ တိုင်ကြားထားသော်လည်း ထိရောက်စွာ အရေး ယူခြင်းမရှိသဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် လွတ်တော်ဗဟိုအစိုးရအဖွဲထံသို့ တိုင်ကြားမှုများ ဆက်လက် ပြုလုပ်ထားကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပါတီမှ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရှိ ရသည်။
သတင်းများအား ပြန်လည်ဝေမျှပေးသော မြစ်မခ မီဒီယာအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ရန်ကုန်မြို့တော်အခြေစိုက်ရာ စာပေစိစစ်ရေးနှင့် မှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာနမှ နေပြည်တော်တိုင်းမ် အမည်ဖြင့် အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်တစ်စောင် ထုတ်ဝေ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ ဂျာနယ် ကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်မှူးအဆင့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူမည်ဖြစ်ပြီး တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာမှစ၍ အခြားအဆင့်များမှာ ပြည်တွင်းမီဒီယာလောကတွင် လက်ရှိ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။အယ်ဒီတာတဦး၏လစာကိုတော့ တလ ကျပ်ငွေတစ်သိန်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။
ယင်းဂျာနယ်တွင်အခြား ၀န်ကြီးဌာနပိုင် ဂျာနယ်တွေလို ပေါ်လစီတွေ မရေးရပါဘူးဟုသတင်းရရှိပါသည်။လစဉ် ၂၀ရက်နေ့ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ပြီး၊စာပေစိစစ်ရေးမှ ထုတ်ဝေသည့် ဂျာနယ်ဖြစ်သဖြင့် မည်သည့် သတင်း များဖော်ပြ မည် ကိုတော့ စောင့်မျှော်ဖတ် ရှု့ဝေဖန် သုံးသပ်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါသည်။
မန္တလေးကျောက်ဝိုင်း ဖျက်သိမ်း မည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်
မန်းကျောက်ဝိုင်း ဖျက်သိမ်း မည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေခြင်း ကြောင့် မန်းကျောက်ဝိုင်း ဈေးကွက် အတွင်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည် ။ကျောက် ဝိုင်း ဖျက်သိမ်းမည်ဆို သည့်သတင်းမှာ အောက်တိုဘာလ ဒုတိယပတ်အတွင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပြီးယင်းသတင်းကြောင့်ကျောက်ဝိုင်း အတွင်းအခြေချလုပ်ကိုင်ေ နကြသည့် ဆိုင်ခန်းအငှား အချို့နှင့် ပျံကျရောင်း ဝယ်လုပ်ကိုင် နေကြသူအများစုမှာ လုပ်ငန်းနေရာပျောက်မည်ကို စိုးရိမ် နေကြကြောင်း သိရသည်။”ဖျက်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက အတိအကျကိုကြားထားတာ၊ အစည်း အဝေးလည်း လုပ်ပြီးပြီ ပြောတယ်၊ စီမံကိန်းနဲ့လုပ်သွားမယ်ပေါ့၊ တကယ် ဖျက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဝိုင်းထဲကဆိုင် ခန်းအငှားတွေနဲ့ ပျံကျတွေ နေရာ ပျောက်တာပဲ၊ ဘယ်သွားလုပ်စားရ မှန်းမသိဖြစ်သွားမှာ” ဟု ကျောက် ဝိုင်းပွဲစား တစ်ဦးက ပြောသည်။ကျောက်ဝိုင်းဖျက်သိမ်းမည့် သတင်းမှာမန္တလေးမြို့တွင်းကျောက် မျက်အချောထည် ဈေးကွက် ဖော် ထုတ်တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်နေသည့် အကြောင်းအပေါ်အခြေခံထွက်ပေါ် လာခြင်း ဖြစ် သည်။”ဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ သတင်း တွေ ကျွန်တော်တို့လည်း ကြားပါ တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒါက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဒီလိုပဲကောလဟလပြောကြတာပါ” ဟုကျောက်ဝိုင်းအကျိုးေ ဆာင်ကော်မ တီတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ပင် လွန်ခဲ့သောဆယ် နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကလည်း ကျောက်ဝိုင်းဖျက်သိမ်းမည့်သတင်း များထွက်ေ ပ်ါခဲ့ဖူးကြောင်းသိရသည်။”ဆိုင်ခန်းသမားတွေက တစ် ခန်းကို သိန်းရာကျော် ပေးထားရ တာ၊ ဖျက်သိမ်းလို့အစားပြန်ရရင်ခံ သာပေမယ့်၊ ဘာမှမရဘူးဆိုရင် တော့ နစ်နာမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်” ဟု ဆိုင်ဖျက်သိမ်းလျှင် ကြုံတွေ့ရ နိုင်သည့် အခြေ အနေနှင့်ပတ်သက် ၍ ဆိုင်ခန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောသည် ။ကျောက်မျက်အချော ထည် ဈေးကို တခြားနေရာသစ် လုပ် ဆောင်ဖြစ်လျှင်ပင် ကျောက်ဝိုင်း ဖျက်သိမ်း ရန်မှာမသေချာကြောင်း ကျောက်မျက် အသင်း(မန္တလေး)မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး က ပြော သည်။သို့ရာတွင် ကျောက်ဝိုင်း ဖျက် သိမ်းမည် မဖျက်သိမ်းမည်မှာ တိကျ သေချာ မသိရှိရသေးဘဲ ဖျက်သိမ်း ၍ နစ်နာမှုများမည်ဆိုပါက စဉ်းစား သင့်ကြောင်းနှင့် ဝိုင်းအတွင်း လုပ် ကိုင်စားသောက်နေသူများမှတောင်း ဆိုမှု ပြုလုပ်သင့်ကြောင်းလေ့လာ သူတစ်ဦးက ပြောသည်ဟုPopular News တွင်ထိုသတင်းအားဖော်ပြထားသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, November 09, 2011
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒါရိုက်တာ Besson အား သူမ၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်း ရုပ်ရှင်အတွက် ကျေးဇူးစကားဆို
(AFP သတင်းမှ7Nov 2011 ရက်စွဲပါ “Aung San Suu Kyi Thanks Besson for film of her life story” သတင်းကို Transparency Myanmar မှဘာသာပြန်ဆိုသည်)
မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒါရိုက်တာ Luc Besson အား သူမ၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့် သူမ၏ နိုင်ငံအပေါ် အလင်းဖြန့်ကျက်ပေးခြင်းတို့အတွက် ကျေးဇူးစကားဆိုခဲ့ သည်ပာု ပြင်သစ်လူမျိုး ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ က တနလာင်္နေ့တွင်ပြောကြားသည်။
ဒါရိုက်တာ Luc Besson က သူရိုက်ကူးသော “The Lady” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ပြင်သစ်၌ ရုံတင်မည့် နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်မတိုင်မှီ မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုဘယ်ဆုရှင်ထံ မက်ဆေ့ခ်ျ ပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပာု ပြင်သစ်မြောက်ပိုင်း Lille မြို့တွင် ကျောင်းသားတစ်စုကို ပြောကြားခဲ့သည်။
“သူမရဲ့ နိုင်ငံကို အလင်းရောင် ဖြန့်ကျက်ပေးနိုင်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ သူမက အကြောင်းပြန်တယ်” ပာု Luc Besson က EDHEC University တွင် ပောာပြောစဉ်ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရ၏ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်မှုကို ခံနေရဆဲ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်က သူမထံ ရုပ်ရှင်ကော်ပီ ပို့ပေးရန် ဖြစ်နိုင်ပါသလား ပာုလည်း မေးမြန်းခဲ့သည်။
မြန်မာအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် နိုဘယ်ဆုရှင်သည် မနှစ်က နိုဝင်ဘာလ လွတ်မြောက်မလာမီအထိ ၁၅ နှစ်ခန့် နေအိမ်တွင် အကျယ်ချုပ် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် လျို့ဝှက်လမ်းကြောင်းမှတဆင့် တစ်မူထူးခြားသော စာများ အပြန်အလှန်ပေးပို့ မှုကို လပေါင်း များစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ပာု Luc Besson ကဆိုပါသည်။
ရိုက်ကူးမှု ပြီးစီးသွားချိန် မနှစ်က နိုဝင်ဘာလက သူမလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်တွင် Luc Besson က ယင်း၏ ရုပ်ရှင်ထဲမှ ဇာတ်ကောင်ကို အပြင်၌ တွေ့ဆုံရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။
ဇာတ်ကား၏ အပိုင်းအများစုကို ရိုက်ကူးခဲ့သော ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သူမ၏ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားများက အသေးစိတ် ပြန်လည် စစ်ဆေးဖန်တီးနေစဉ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရုတ်တရက် သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု Luc Besson က တူးဆွ ပြောကြား သည်။
ပြင်သစ်ဒါရိုက်တာသည် ခရီးသွားတိုးရစ်အဖြစ် ဝင်ရောက်လာရင်း အသေးစားကင်မရာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ ဇာတ်ဝင်ခန်းအချို့ကို ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးခဲ့သည်ပာု လည်း သိရှိရသည်။
“အဲဒီမှာ(မြန်မာနိုင်ငံမှာ) ၁၇ နာရီလောက်အပြေးအလွှား ရိုက်ကူးခဲ့ရတာပါ၊ တခါတလေ စစ်သားတွေနဲ့ ၉ ပေ၊ ၁၀ ပေ အကွာလောက်ကပေါ့” ပာု Luc Besson ကပြန်ပြောင်းပြောဆိုသည်။
ထို့နောက်တွင် Green Screen နည်းပညာ၏ အကူအညီဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဇာတ်ဝင်ခန်းပြကွက်များပေါ်တွင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များကထပ်၍ သရုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ပာု Luc Besson ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဆိုပါ ရုပ်ရှင်တွင် သူမ၏ ဖခင်နှင့် ဗြိတိသျှလူမျိုးခင်ပွန်း တို့သေဆုံးမှုကို ထည့်သွင်းရိုက်ကူးမှုကြောင့် သူမအနေဖြင့် ကြည့်ရှုရန် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပာု Luc Besson ကပြောကြားခဲ့သည်။
လုံလောက်တဲ့ သတ္တိမွေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကြည့်မှာပါလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်ပာု Besson ကပြောကြားသည်။
သို့သော် သူမ၏သားတစ်ဦး ကြည့်ရှုပြီးသွားကြောင်းနှင့် အလွန်ကြေကွဲသွားကြောင်း ဒါရိုက်တာက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
၎င်းဇာတ်ကားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေရာကို မလေးရှားနွယ်ဖွား ဂျိမ်းဘွန်းမင်းသမီး Michelle Yeoh က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ မင်းသမီးသည် နိုဘယ်ဆုရှင် ခေါင်းဆောင်ကို ရန်ကုန်မြို့ အင်းလျားလမ်းနေအိမ်၌ ပြီးခဲ့သော ဒီဇင်ဘာလက သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဖြစ်၍ တစ်ကြိမ် ထပ်မံတွေ့ဆုံရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာစဉ် မြန်မာအစိုးရ အာဏာပိုင်များက ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် တားဆီးကာ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပ သမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီးနှင့် အင်တာဗျူး
EU ကော်မရှင်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်တွေတိုင်းမှာ ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကို မြန်မာအစိုးရဆီက ရခဲ့ပါသလား။
ဒါပေါ့ ရခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာတာတစ်နှစ်တောင်ပြည့်ပြီ။ နောက်ပြီး ရွေးကောက် ပွဲ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အပေါ် သမ္မတက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်။ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံကိစ္စလည်းပါပါတယ်။ အခု ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော့်ကို ၀ိုင်းပြီးသတင်းမေးနိုင်တယ်၊ ဒါက ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကို ပြတာပါ။ အစိုးရက အပြောင်းအလဲလုပ်တိုင်း ကျွန်တော်တို့ဘက်က ပြောင်းလဲမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ပေးခဲ့ရင် EU က Sanction ကို ချက်ချင်းပယ်ဖျက်ပေးမယ် လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်လို့ မြန်မာအစိုးရက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးခဲ့ရင် EU အနေနဲ့ Sanction ကို ချက်ချင်းရုပ်သိမ်းပေးမှာလား သိချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးလွှတ်ပေးခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ Sanction ကိစ္စကို review ပြန်လုပ်မှာပါ။ ချက်ချင်းတော့ မရုပ်သိမ်းပါဘူး။ EU မှာ မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပေါ်လစီ သုံးခုရှိပါတယ်။ (၁) ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ (၂) ပြန်လည်စဉ်းစားခြင်း၊ (၃) ပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သံအမက်ကြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘယ်အကြောင်းအရာ ကို အဓိကဆွေးနွေးခဲ့ပါသလဲ။
ကျွန်တော် ဒါကို အခုအချိန် မပြောချင်သေးပါဘူး။ သူမကိုယ်တိုင် ပြောတာပဲ ကောင်းပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းက ကျေးလက်မှာပါ။ ကျေးလက်ဒေသအများစုကလည်း ဆင်းရဲ ကြပါတယ်။ ဒါတွေကို အဓိကဖြေရှင်းဖို့အတွက် ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍကို အရင်ပြုပြင်ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီပွဲကို ကူညီရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကဏ္ဍတိုင်းကို ပြောင်းလဲစေချင်ပါတယ်။ ဒီ ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိက ကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေကို နေရာတိုင်းမှာ ရှိစေချင်ပါတယ်။
၁၃လမ်း(အောက်)၊ဦးဘဂျမ်းလမ်းမှာ ကျင်းပတဲ့ (၆၈)ကြိမ်မြောက် တန်ဆောင်တိုင် ကာတွန်းမီးထွန်းပွဲ နှင့် ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲတော်
သတင်း၊ဓာတ်ပုံ...Burma VJ Media
ပခုက္ကူရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် ပန်းချီဆရာများစုပေါင်း၍ ပန်းချီပြပွဲပြုလုပ်ရောင်းချသွားမည်
ပခုက္ကူရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့ ပန်းဆိုးတန်းရှိ လောကနတ် ဂယ်လာရီတွင် ပန်းချီဆရာများစုပေါင်း၍ ပန်းချီပြပွဲတစ်ရပ်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပန်းချီပြပွဲအား လှိုင်းမဲ့ရေပြင် ပန်းချီပြပွဲဟု အမည်ပေးထားပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့မှ (၄) ရက်နေ့ထိပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
`ပန်ချီကားရောင်းရတဲ့ငွေတွေကို ပခုက္ကူရော၊ ဆိပ်ဖြူမှာရော ရှိတဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် အကုန်လှူဒါန်းသွားမှာပါ။ တစ်ချို့တွေကိုကြတော့ ရောင်းရငွေရဲ့ ၇၀% ကို လှူဒါန်းမှာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ ၃၀% ကိုတော့ ရေးဆွဲတဲ့ပန်းချီဆရာတွေကို ပြန်ပေးသွားမှာပါ ´ ဟု အဆိုပါပန်းချီပြပွဲအားစီစဉ်သူ ပန်းချီဆရာ ကိုလှထွဏ်းအောင်ကပြောသည်။
ရေးဆွဲရမည့်ပန်းချီကားအမျိုးအစားများအား သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပဲ မိမိနှစ်သက်ရာ လွတ်လပ်စွာရေးဆွဲ၍ ပါဝင်ပြသနိုင်ကြောင်း ကိုလှထွဏ်းအောင်ကပြောသည်။
`ဒီပန်းချီပြပွဲမှာ ဘာပုံမှရမှာတို့ဘာတို့မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာရေးဆွဲပြီး လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်´ ဟု အဆိုပါပန်းချီပြပွဲတွင် ပါဝင်ပြသမည့် ပန်းချီဆရာ ကိုကျော်ဖြူစံကပြောသည်။
အဆိုပါပန်းချီပြပွဲတွင် ပန်းချီဆရာ ၅၀ ကျော်၏ ပန်းချီကားပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ပါဝင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး ပန်းချီကားရောင်းရငွေအများစုအား ရေဘေးသင့်၍ ဒုက္ခရောက်နေသူများထံ တိုက်ရိုက် လှူဒါန်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုပန်းချီပြပွဲပြီးပါက မန္တလေးမြို့တွင်လည်း ပန်းချီကားများ သွားရောက်ပြသနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
သတင်းများ ပြန်လည်ဝေမျှပေးသော မြစ်မခမီဒီယာအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
True News သစ္စာ ဂျာနယ် ၀၈ ၁၁ ၁၁ ပါ မောင်ဝံသ မှန်တာပြောသစ္စာဆောင်းပါး။
နိုင်ငံရေး သဘောတရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သုံးလေးဆယ်လောက်က ဆရာဒဂုန်တာရာရဲ့ အဆိုအမိန့်တစ်ခုကို သတိရမိတယ်။ ဆရာက ]]နိုင်ငံရေးဆိုတာ စီးပွားရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လူစုလူဝေးနဲ့ တောင်းဆို တာဖြစ်တယ်}} လို့ ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျ။ ဖတ်ဖူးခဲ့တာ ကြာပြီဆိုတော့ တိတိကျကျတော့ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိက ဆိုလိုချက်ကတော့ အဲဒီအတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောနိုင်တယ်ဗျ။
ဓနဥစ္စာကို ဘယ်လို ခွဲဝေသလဲ
ဆရာ့ရဲ့စကားကို ကျွန်တော် နားလည်သဘောပေါက်တာကတော့ ကမ္ဘာမှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သမျှ တော်လှန်ရေးတွေ၊ ပြည်တွင်းစစ်တွေ၊ လူထုအုံ
အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံရယ်လို့ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ချိန်ကစပြီး လူသားတွေ ဒီကနေ့အထိ မပြတ်ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ အဓိကပြဿနာကြီး တစ်ခုက အဲသလို ရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို ခွဲဝေသုံးစွဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဗျ။ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာကို ကိုင်တွယ်သုံးစွဲတဲ့ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား (အစိုးရ)နဲ့အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစား (ပြည်သူ)တို့ကြားမှာ အဲဒီဝင်ငွေခွဲဝေ သုံးစွဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောထားကွဲ ပြားမှုဟာ တစ်လျှောက်လုံး ရှိလာခဲ့တဲ့ အခြင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျာ။ အဲဒီသဘောထားကွဲပြားမှု နက်ရှိုင်းပြင်းထန်လာတဲ့အခါ သပိတ် တွေ၊ ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ လူထုအုံ
အပ်နဲ့ထွင်းရုံနဲ့ ပြီးသွားနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခု ပုဆိန်နဲ့ပေါက်ရတဲ့ အခြေအနေအထိ ရောက်လာပြီရင်တော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ထိခိုက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုက သိပ်ကိုကြီးတယ်ဗျ။ ]]ပြည်တွင်းစစ်တစ်ခုရဲ့ ပထမဆုံးသေနတ်သံ ပေါ်ထွက်လာချိန်မှာ အဲဒီသေနတ်ကျည်ဆန် ထိမှန်ပြီး ကျဆုံးသွားသူကတော့ တရားမျှတမှုဖြစ်တယ်}} ဆိုတဲ့ နာမည်ကျော်နိုင်ငံရေးအဆိုအမိန့်တစ်ခု ရှိတယ်ဗျ။ တရားမျှတမှု ကျဆုံးသွားပြီဆိုမှတော့ အဲဒီလူအဖွဲ့အစည်းဟာ ]တောတွင်းဥပဒေ Law of the Jungle ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးရာ တိရစ္ဆာန်ကမ္ဘာအဖြစ်သို့ လျှောကျ သွားပြီပေါ့ဗျာ။ တိရစ္ဆာန်ကမ္ဘာဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းမှုနိတ္ထိ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဗလာ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သုည ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံး အသိ ဖြစ်တယ်ဗျ။
ဒီကနေ့ ကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင် ဒီအချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်တွေ့နိုင်တယ်ဗျာ။ နိုင်ငံရဲ့ ဓနဥစ္စာကို မှန်မှန်ကန်ကန် နဲ့ တရားနည်းလမ်းကျစွာ ခွဲဝေမှုပြုနိုင်တဲ့ နိုင်ငံများဟာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေကြပြီး အဲသလို မလုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံများကတော့ မုန်တိုင်းထန်နေကြတာ ဖြစ်တယ်ဗျ။
နိုင်ငံရဲ့ဓနဥစ္စာ ခွဲဝေမှုစနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ (တစ်နည်း) နိုင်ငံရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ပြည်သူတွေရဲ့ အုံ
ပထမအမျိုးအစားနိုင်ငံတွေမှာ လူထုကြီးရဲ့ ဆန္ဒ (နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ) မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြည့်ဝနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အဲဒီနိုင်ငံတွေဟာ ငြိမ်းချမ်း လွတ်လပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ထိခိုက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးစွာနဲ့ ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ကြတယ် ဗျ။
ဒုတိယအမျိုးအစားနိုင်ငံတွေမှာတော့ ဥာဏ်ပညာ၊ အမြော်အမြင် နည်းပါးတဲ့ ဖိုးသုညတွေ ကြီးစိုး လွှမ်းမိုးတဲ့ အစိုးရတွေဟာ မိမိတို့ပြည်သူတွေရဲ့ တရားနဲ့ လျော်ညီတဲ့ဆန္ဒကို ဖီဆန်အာခံဆန့်ကျင်ပြီး မိမိတို့ အာဏာ တည်မြဲရေးအတွက်သာ ခေါင်းမာမာနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရှုထောင့်ကကြည့်ရင် ကြီးစွာသော ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတယ်ဗျ။ ]]ဖွတ် မိကျောင်းဖြစ် မြစ်မချမ်းသာ}}ဆိုတဲ့ စကားပုံနဲ့ကတော့ ကွက်တိပါပဲဗျာ။ (ကွယ်လွန်သူ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုက လူဖျင်းလူညံ့တွေကို ဖိုးသုညလို့ သုံးနှုန်းခဲ့တာ သဘောကျလွန်းလို့ ယူသုံးလိုက်တာပါ။)
IMF ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အသုံးပြုပြီး ပထ၀ီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က မကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန် ခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာ တစ်စောင်အရ ]]အာရပ်နွေဦး}} လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ လူထုအုံကြွမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာ လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယား၊ အီဂျစ်၊ တူနီးရှား၊ ဘာရိန်းနဲ့ ယီမင်နိုင်ငံတွေရဲ့ စုစုပေါင်းGDPဆုံးရှုံးမှု ဒေါ်လာ ၂၀.၆၅ ဘီလျံနဲ့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေဆုံးရှုံးမှု ဒေါ်လာ ၃၅.၂၈ ဘီလျံရှိခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်ဗျ။ ယီမင်နဲ့ လစ်ဗျားဟာ အခွန်အခ ဆုံးရှုံးမှု အဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီး ယီမင်က ၇၇% နဲ့ လစ်ဗျားက ၈၄% ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်ဗျ။ လူထုအုံကြွမှုနဲ့ မငြိမ်မသက်ဖြစ်မှုများကြောင့် နိုင်ငံရဲ့GDP အများဆုံး ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံက လစ်ဗျားဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၇.၆၇ ဘီလျံဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ အဲဒီအစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ လူ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံပျက်စီးမှုတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၊ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့မှုတွေ မပါသေးဘူးလို့ ဆိုတယ်ဗျာ။ အဲဒါတွေပါ ထည့်တွက်ရင်တော့ ဆုံးရှုံးမှုဟာ မကြည့်ရဲလောက်အောင် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာ။
အဲဒါဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ တရားနည်းလမ်းကျတဲ့ ဆန္ဒကို ဥာဏ်ပညာအမြော်အမြင်နည်းပါးတဲ့ ဖိုးသုညအစိုးရတွေရဲ့ မိုက်မဲစွာ အာခံ ဆန့်ကျင်ခဲ့မှုတွေကြောင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေ ကုန်ကျခဲ့ရတဲ့ စရိတ်တွေ ဖြစ်တယ်ဗျာ။
ဒီရေကို လက်ဖ၀ါးနဲ့တားဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက် သို့မဟုတ် လူတစ်စုကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှု အများအပြားနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ အဲဒီနိုင်ငံတွေက ပြည်သူတွေအတွက် စာနာစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေမိတဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာ သူတို့ဆီက ကပ်ဘေးဆိုးမျိုးကို ရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပုံရတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တော့ စိတ်သက်သာရာရမိသလို ခံစားနေရတယ်ဗျာ။
၀၁ ၁၁ ၁၁
ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် ယခုအပတ်ထုတ်ပါ မောင်ဝံသ / ပြောချင်လွန်းလို့ဆောင်းပါး။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးဟာ သော့ချက်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြတဲ့အခါ ဘယ်သူမှ ငြင်း ကြမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာပေမယ့် အဲဒီစကားကို နားလည်သဘောပေါက်ပုံဟာ အမြဲတမ်း နှစ်မျိုး ဖြစ်နေတယ်လို့ ကျွန်တော် ခံစား မိတယ်ဗျ။
တစ်မျိုးက ညီညွတ်ရေးရဲ့ အကျိုးငှာ ညီညွတ်ရေးရအောင် မဖြစ် ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စဉ်းစားပုံဖြစ်ပါတယ်။ Unity for unity's sake လို့ ပြောလေ့ရှိတယ်ဗျ။ နိုင်ငံ့အကျိုး ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး လိုအပ်တယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားရာကနေ အဲဒီဖြစ်စဉ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ကျော်လွှားလွန်မြောက်ဖို့ အင်မတန်မှ ခက်ခဲတဲ့ အတား အဆီး အပိတ်အဆို့တွေ တစ်စတစ်စ ပိုမိုများပြားစွာ တွေ့လာရတဲ့အခါ တရွေ့ရွေ့ လမ်းချော်လာတယ်။ အကျိုးဆက်အဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံဖြစ်လာရေးဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်က မှေးမှိန်လာပြီး သူ့နေရာမှာ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးရဖို့အတွက် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး ရကိုရမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်က အစားထိုး ၀င်ရောက်လာတယ်။ တကယ်က အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးဆိုတာ ပန်းတိုင် မဟုတ်ဘူး။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံအဖြစ်သို့ ဆိုတာက ပန်းတိုင် အစစ် ဖြစ်ရမှာပါ။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးသာ ပထမ၊ ပဓာန၊ အဓိကဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးရဖို့ ဘယ်နည်းနဲ့မဆို လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ နားလည်သဘောပေါက်ပုံမျိုးဟာ လွဲချော်တဲ့ အတွေး အခေါ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ကြားခဲ့ ဖတ်ခဲ့ရဖူးတဲ့ ]]ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှု}} ၉၉.၉၉% ဆိုတဲ့ ဖော်ပြချက်မျိုးတွေဟာ အဲဒီစဉ်းစားပုံ စဉ်းစားနည်းကနေ ပေါ်ထွက်လာတာ ဖြစ်တယ်ဗျ။
ညီညွတ်ရေးအတွက် ပိုင်ခွင့်တွေ ရုပ်သိမ်းခံရတာမျိုး
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ]]ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် ညီညွတ်ရေး}}Unity for people's Sake ဆိုတဲ့ စဉ်းစားပုံဖြစ်တယ်ဗျ။ အမျိုး သားညီညွတ်ရေးဟာ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သို့မဟုတ် ပြည်သူ့အကျိုး အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံပေမယ့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးဟာ ပြည်သူ့အကျိုးကို ကျော်နင်းလွှမ်းမိုးသွားတာမျိုးကို ဒီစဉ်းစားပုံက ခွင့်မပြုဘူး။ ဆိုလိုတာက အမျိုးသားညီညွတ်ရေး ရဖို့ဆိုရင် မွေးရာပါ အခြေခံရပိုင်ခွင့်များ အပါအ၀င် ပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးများကိုပါ ပယ်ဖျက်ရုပ်သိမ်းပြီး လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ဒီစဉ်းစားပုံက လက်မခံတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာ မတူကွဲပြား ခြားနားတဲ့ အရောင်တွေကို အလင်းအမှောင် အဖိအဖော့ အချိုးအဆ မှန်ကန်စွာ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်လိုပဲ မတူကွဲပြားခြားနားတဲ့ သဘောထား အမြင် ရပ်တည်ချက်တွေကို လေးစားတန်ဖိုးထား ပြီး စိတ်ရှည်ရှည် သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ တည်ဆောက်မှသာ ရနိုင်တဲ့ ရတနာတစ်ပါးဖြစ်တယ် ဆိုတာကို အပြည့်အ၀ဆုံးနားလည်ပြီး နားလည်တဲ့အတိုင်း အကောင်းဆုံး လုပ်ပြသွားနိုင်ခဲ့သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဖြစ်တယ်ဗျ။
အခုအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ ရာချီရှိနေပြီမို့ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းလေ့လာလိုလျှင် ရှုထောင့်စုံက လေ့လာနိုင်ပါပြီဗျာ။ အဲဒီထဲမှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကို ဗိုလ်ချုပ် ဘယ်လို နားလည်သဘောပေါက် ခံယူပြီး ဘယ်လိုကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေလည်း အများအပြား ပါဝင်နေတယ်ဗျ။
အဲဒီလုပ်ရပ်တွေထဲမှာ အထင်ရှားဆုံးကတော့ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ ခွဲထွက်ခွင့် ပုဒ်မ ထည့်ပေးဖို့ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုများရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို သဘောတူခဲ့တာဟာ အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ခွဲထွက်ခွင့်ဆိုတာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ ပြဒါးတစ်လမ်း သံတစ်လမ်းပဲလို့ ရှုမြင်နိုင်စရာရှိပေမယ့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်း တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သံသယတွေ ကျေပျက်သွားအောင် လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်တာက တစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးက တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးများအပေါ် လွှမ်းမိုးကျော်နင်းသွားတာ မျိုး မဖြစ်စေချင်တာကလည်း တစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျ။
နောက်တစ်ခုကတော့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေကို တော်လှန်ဖို့ ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့ လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကြီး အဖွဲ့ကြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့ပုံ သာဓက ဖြစ်တယ်ဗျာ။ (ပထမအမည်က ဖတပလ၊ တော်လှန်ရေးပြီးသွားတော့ ဖဆပလ ဖြစ်လာပါတယ်။)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပဒေသရာဇ် ခေတ် အဆုံးသတ်ခံရပြီး သူ့ကျွန်ဖြစ်ရ တဲ့နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးပေါ်ထွက် လာခဲ့တဲ့ အမျိုးသား တပ်မတော်ကြီးရဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်နေပေမယ့် ထမ်းဆောင်ရမယ့် တော်လှန်ရေးတာဝန်ရဲ့ ကြီးမား လေးနက်ပုံကို ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ငါ့မြင်းငါစိုင်း မလုပ်ဘဲ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီ တို့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့ လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့တာကိုကြည့်ရင် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကြီးမားတဲ့အမြော်အမြင်ကို နားလည်နိုင်တယ်ဗျာ။
ဒါ့အပြင် ဂျပန်တော်လှန်ရေးအပြီး ဖ.ဆ.ပ.လ အဖွဲ့ကြီး တိုးချဲ့ရာမှာ ဘကြီးဘဘေလို လက်ျာနိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတွေကိုပါ ထည့်သွင်းခဲ့ကာ မိမိအပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှားနေတဲ့ ဂဠုန်ဦးစောကို မိမိကိုယ်မိမိ နှိမ့်ချမှု အပြည့်နဲ့ လိုက်လိုက်လျောလျော ဆက်ဆံခဲ့တာ၊ အိုင်စီအက်စ် ဦးတင်ထွဋ်အစရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး အတွေ့အကြုံရှိသူ ပညာတတ်တွေကို နေရာပေးခဲ့တာတွေက ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအတွက် အမြော်အမြင်ကြီးမှုကို ဖော်ပြနေတယ်မဟုတ်ပါလားဗျာ။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဟာ ပြည်သူ့အကျိုး (အဲဒီတုန်းကတော့ လွတ်လပ်ရေးပန်းတိုင်ပေါ့ဗျာ)အတွက် အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို နှလုံးသွင်းထားပေမယ့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးရဖို့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်ဟာ တရားနဲ့လျော်ညီတဲ့ နည်းလမ်းများကိုသာ အစဉ်ပြုခဲ့သူ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အဲဒီဖြစ်ရပ်တွေကို ကြည့်ရင် သိနိုင်တယ်ဗျ။
တကယ်တော့လည်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာ အမျိုးသားရေး အကျပ်အတည်းကြီးတစ် ခုခု ပေါ်ပေါက်နေချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်လို ရိုးသားဖြူစင် ဖြောင့်မတ် ထက်မြက်ပြီး တိုင်းပြည်အပေါ် စေတနာကောင်း အပြည့်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုးကသာ စိတ်ရှည်ရှည်သဘောထား ကြီးကြီး အမြော်အမြင်ရှိရှိနဲ့ တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ အရာမျိုးဖြစ်တယ်ဗျ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တူတူ မတူတူ ညီညွတ်ကြ ဆိုပြီး အတင်းအကျပ် တည်ဆောက်လို့ရတာမျိုး မဟုတ်ဘူးဗျ။
ကျွန်တော် တွေးမိတာလေးတွေကို စာဖတ်သူများရဲ့ မူလအတွေးနဲ့ တိုက်ဆိုင်ကြည့်နိုင်ဖို့ ဝေမျှလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ။
၀၁ ၁၁ ၁၁.။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မတင်ခြင်း ကိစ္စရပ်ကို နိုဝင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့တွင် ဆုံးဖြတ်မည်
နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သော ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးသန်းထွန်း၊ ဦးလှဖေ၊ ဦးဥာဏ်ဝင်း၊ ဦးအုန်းကြိုင်၊ ဦးဝင်းမြင့်၊ ဒေါ်မေ၀င်းမြင့်၊ ဦးဟံသာမြင့်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးအပြီး တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (National League for Democracy) မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မတင်ခြင်း ကိစ္စရပ်ကို နိုဝင်ဘာလ ၁၈ရက် နေ့တွင် ဗဟိုဦးစီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး ခေါ်ယူပြီး ဆုံးဖြတ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရှိရပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, November 08, 2011
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တစ်နှစ်အကြာတွင် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်များရှိနေဆဲ
(4 November 2011 ရက်စွဲပါ Human Rights Watch မှ Burma : A year after elections , Rights concernes persist ကိုYC မှ ဘာသာပြန်ပါသည်)
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲများအပြီး တစ်နှစ်အကြာတွင် မြန်မာအစိုးရသစ်၏ အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်သော လုပ်ဆောင်မှုများသည် တိုင်းပြည်တွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သော အလေးအနက်ထားရမည့် လူ့အခွင့် အရေးပြဿနာများကို မမြင်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ Human Rights Watch မှ နိုဝင်ဘာလ(၃)ရက် ၂၀၁၁ ကထုတ်ဝေသော စာတမ်း(briefing paper)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
“အစိုးရသစ်ဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေတွေ၊ မူဝါဒပြောင်းလဲမှုအတွက် ကတိတွေပေးနေပေမယ့် တကယ့်စမ်းသပ်မှုကတော့ ပြည်သူလူထုက သူတို့ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက် ကြိုးစားတဲ့အခါ ဘယ်လိုတုန့် ပြန်မလဲ ဆိုတာကိုပဲ ကြည့်ရမှာပါ”ဟု Human Rights Watch မှ အာရှဒါရိုက်တာ Elaine Pearson က ပြောပါ သည်။ “ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ အရပ်သားတွေအပေါ်ရက်စက်မှုတွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ကို နှိပ်စက်တာတွေ၊ ဖိနှိပ်မှုရှိတယ်လို့ပြောရမယ့် တရားရုံးတွေဟာ အရပ်သားအမည်ခံအစိုးရရဲ့ ပထမနှစ်မှာ တွေ့နေရဆဲ လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကဆိုပါသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မတ်လ (၃၀)ရက် ၎င်းတက်လာပြီးနောက် အစိုးရအဖွဲ့ကိုပြောခဲ့သော မိန့်ခွန်းသည် မှတ်မှတ်သားသား ဖြစ်စရာ ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ မီဒီယာကန့်သတ်ချက်များဖြေလျော့ ပေးခြင်း၊ သြဂုတ်လ ဒုတိယလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှစ၍ ဥပဒေအချို့ အတည်ပြုပေးခြင်းများသည် အနည်း ဆုံးစာရွက်ပေါ်တွင် အခြေခံရပိုင်ခွင့်များကိုကာကွယ်ရန် ကတိကဝတ်သစ်များဖြစ်ပေသည်။ အစိုးရသစ်သည် နောက်ထပ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို စီစဉ်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံကိုလည်း အရေးကြီးသော လက္ခဏာ ပြသမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရ၏ ထိပ်တန်းအဖွဲ့ဝင်များသည် စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်ရေးအကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးလေးစားမှုရှိရေးအကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပြည်တွင်း စစ်ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောရန် အကြောင်းများကို ပြောလာကြပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဒီမိုက ရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ၁၉၈၉ မှစ၍ တစ်ခါမျှမရခဲ့ဘူးသေးသော လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားမှု အတွက် အဆင့်တစ်ခုအထိ ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ သူမသည် အစိုးရထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူများနှင့် မှန်မှန်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ စကားပြောမှုများသည် ယခင်ကထက်ပို၍ မျှော်လင့်ချက်များ၊ အရေးပါသော ပြောဆိုမှုများရှိကြောင်းဖော်ပြလာ ပါသည်။
“ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကို ပြည်တွင်းကရော နိုင်ငံတကာကပါ အကောင်းမြင်နဲ့ ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်”ဟု Pearson က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ “ဒါပေမယ့် ဒီပြောင်းလဲမှုဟာ အမျိုးသားအဆင့်အီလစ်အလွှာမှသာဖြစ်နေ တာပါ၊ အခြေခံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်မှာ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်မှာ ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် နဲနဲပဲပြောင်းပါသေးတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုပါသည်။
တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် စစ်တပ်မှ ကျူးလွန်မှုများသည် အရေးယူမှုမရှိပဲ ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါ သည်။ အစိုးရသစ်သည် စစ်တပ်အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စ အမြန်ဆုံးလုပ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း လုပ်ဆောင် နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ အစိုးရသည် အစိုးရဆန့်ကျင်သူများအား ဖိနှိပ်သော ဥပဒေများဖြင့်လည်းကောင်း၊ လွတ် လပ်စွာတရားစီရင်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် တရားရုံးများဖြင့်လည်း ဆက်လက်ဖိနှိပ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ မေလတွင် တစ် ကြိမ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် တစ်ကြိမ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား(၂၉၇)ဦး ခန့်သာလွတ်ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစွာ ထောင်ထဲတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့် အရေးအခြေအနေများတိုးတက်ရေးကိုအမြဲတမ်းငြင်းပယ်ခဲ့သည့် ထုံးစံအတိုင်းပင် အစိုးရသစ်သည်လည်း ဆက် လက်ငြင်းပယ်ဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။ စက်တင်ဘာလက အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သော် လည်း၊ ၎င်း၏ ကတိကဝတ်များနှင့် လွတ်လပ်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာများကျန်နေပါသေးသည်။
လွှတ်တော်သစ်တွင် ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများရှိလာရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းခွင့်ဥပဒေ၊ ငြိမ်း ချမ်းစွာစုဝေးခွင့်ပြုခြင်းနျင့် အတိုက်အခံ ပါတီကြီးဖြစ်သော NLD ပါဝင်ခွင့်ရရန်လမ်းဖွင့်ပေးသော နိုင်ငံရေးပါတီမှ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေများထွက်ပေါ်လာပါသည်။ အဆိုပါ ဥပဒေများသည် စာရွက်ပေါ် တွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းမျှသာရှိသေးပြီး မည်မျှအကောင်အထည်အဖော်နိုင်မည်ဆိုသည်ကို စောင့်ကြည့်ရဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာမှ အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်များလာရောက်မှုများရှိခဲ့ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Vijay Nambiar ၊ ဥရောပသမဂ္ဂမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊ အမေရိကန်အထူး ကိုယ်စားလှယ် Derek Mitchell ၊ သြစတြေးလျနှင့် အင်ဒိုနီးရှားမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့် အရေးကိစ္စအတွက် ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Tomas Ojea Quintana တို့ လာရောက်ကြပါသည်။
“နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ ကတိတွေထိုးပြီးပေးလာတာကိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ အမှန် တကယ်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ထောက်ခံသင့်ပါတယ်။ ပူပန်နေတဲ့အစိုးရတွေက မြန်မာအစိုးရကို အခြေခံရပိုင်ခွင့် တွေတိုးမြှင့်ပေးနိုင်မယ့် စစ်မှန်တဲ့အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့ ဖိအား ပေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်”ဟု Pearson က ပြောပါသည်။ “ဒိကတိတွေ ဘယ်လောက်စစ်မှန်လဲ၊ ဘယ်လောက်ခရီးရောက်မလဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံ က သာမန်ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝတွေဘယ်လောက်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ မသေချာသေးပါဘူး” ဟု ၎င်းကပြောပါသည်။
မဲခေါင်မြစ် တရုတ် ၁၃ ယောက်သတ်ခံရမှု ထိုင်းတပ်မတော် လက်ချက်မဟုတ်ဟု ထိုင်းအရာရှိများပြော
မဲခေါင်မြစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၃ ဦးသတ် ဖြတ် ခံရခြင်းမှာ မိမိတို့ထိုင်းတပ်မတော်မှတပ်သား များ ၏လက်ချက် မဟုတ်သည်ကို အာမခံနိုင် ကြောင်း ထိုင်းတပ်မတော် အကြီးအကဲများကပြော သည်။
“ထိုင်းတပ်သား ၉ ဦး တရားရုံးရောက်တာဟာ တရုတ် ၁၃ယောက်ကိုသတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဝန်ခံချက်သွားပေး တာ မဟုတ် ပါဘူး။ သူတို့ ၉ ယောက်အပေါ် ဘာပြစ်မှုတွေနဲ့ တရားစွဲ ဖို့ဆင့်ခေါ်တာလဲဆိုတာသိရအောင်လို့ တရားရုံးကိုသွားတာဖြစ် တယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ထွက်နေပေမယ့် ကျနော်တို့ တပ်မတော်သားကိုတော့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ထိုင်းတပ်မတော် ဖာမိုင်းတပ်မှူး ဗိုလ်ချုပ် ပရကန်း ချုန်းလယွတ် ကပြောသည်။
ထိုင်းစစ်သည် ၉ ဦးအား အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်က ထိုင်း ရဲအဖွဲ့မှခေါ်ယူ၍လူသတ်မှုနှင့်အလောင်းရွှေ့ ပြောင်း မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အလားတူ ထိုင်းစစ်တပ် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရယွတ်ု ဂျန်အိုးချားကလည်း - ထိုင်းစစ်တပ်အရာရှိ ၉ ဦးမှာ မိမိတို့ ပြစ်မှုကင်းစင်ကြောင်း သက်သေပြလို၍ ရဲအဖွဲ့ထံရောက်ရ ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစနေနေ့ထုတ်ဘန် ကောက် ပို့စ်သတင်းစာတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
“ ကျနော်တို့သတင်းရတာကတော့ တရုတ် ၁၃ ဦးကိုသတ်ဖြတ်တာဟာ အဲဒီဒေသတဝိုက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့ နော်ခမ်း တို့လက် ချက်ဘဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခင်းဖြစ်ပွါးတဲ့နေရာက ထိုင်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ကိန်းဆဲန်နဲ့ ကီလိုမီတာ ၂၀ လောက် ဝေးတဲ့နေရာလေ။ အဲ့နေရာမှာ အသတ်ခံရလို့ကျိန်းဆဲန်မှာအလောင်း ကပေါလော လာပေါ်တာပေါ့။ ထိုင်းထိန်းချုပ်ရေ ပြင် မှာအသတ်ခံရရင် ဟိုးအကြေဖက်က ကျိန်းခေါန်ဖက်မှာ အလောင်းက ပေါ်မှာပေါ့။ နောက်ပြီး သတ်မယ့် သတ်ရင် ထိုင်းကနာမည်ပျက်ဘယ်ခံပါ့မလဲ။ အလောင်းကို တခြားမှာသွား ဖျောက်ပစ်လိုက်မှာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ စစ်တပ်က လုပ်တာမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့အာမခံ ရဲတာပါ” ဟု ထိုင်း အရာရှိတဦးက ပြော၏။
မြန်မာနှင့်လောဝ်တို့အား ညွန်းဆိုစွပ်စွဲခြင်းမဟုတ်။ သို့သော်အစုန်အဆန်လှေများအား ပြန်ပေးဆွဲခြင်းကုန် သည် များအား ဓါးပြတိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်းလုပ်လေ့ရှိသော နော်ခမ်းအဖွဲ့လှုပ်ရှားရာ မြန်မာနှင့်လောဝ်ပိုင်နက် ရေပြင် တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကြောင့် နော်ခမ်းလက်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ၎င်းကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မယ့်ဆိုင်နေ သျှမ်းအမျိုးသားတဦးက - တရုတ်၊ မြန်မာ၊ လောဝ်နှင့် ထိုင်းတို့ အလိုမရှိသော နော်ခမ်း တယောက် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်မျှ မပေးပါက၎င်းအဖွဲ့သည်ဓါးစာခံဖြစ်လာ နိုင်ဘွယ်ရှိ ကြောင်း - သျှမ်းသံတော် ဆင့်အား ပြောသည်။
အောက်တိုဘာ ၅ ရက် က ထိုင်း-မြန်မာ-လာအိုအကြား ရွှေတြိဂံနယ်မြေ မဲခေါင်မြစ်ပေါ် အမည်မသိလက်နက် ကိုင် အဖွဲ့ တဖွဲ့၏ပြန်ပေးဆွဲခံရသော တရုတ်လှေ ၂ စီး မြစ်ထဲမျှောပါလာရာ နယ်စပ်လုံခြုံရေးစောင့် ဖာမိုင်း ထိုင်းစစ်တပ်နှင့်ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါပစ်ခတ်မှုအပြီး ထိုင်းစစ်တပ်ကအလောင်း တလောင်း၊ ရာဘအပြား ၉ သိန်းကျော်သိမ်းဆည်း ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာ ၇ ရက် မှ လူသေအလောင်း ၁၂ လောင်း မဲခေါင်မြစ်အတိုင်းမျှောလာပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ကျိုင်းဆျဲန် မြို့နယ်တွင်တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်အစိုးရကအဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တရားခံအမြန်ဆုံးဖေါ်ထုတ်ပေးရန် ထိုင်း မြန်မာ လောဝ်တို့ အားတောင်းဆိုထားပြီးမဲခေါင် မြစ်အတွင်းယာဉ်သွားလာ အားလုံးပိတ်ထားခဲ့သည်။﻿
“ဒီနေ့က တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့။ တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ ဆိုပေမဲ့ တကယ် ရွေးကောက်ပွဲက စပြီးတော့ ပြည်သူတွေ မျှော်လင့်သလိုမဖြစ်ပါဘူး။ ကျမတို့လည်း အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကစပြီးတော့ မကျေနပ်တာပါ။ တကယ့်မှန်မှန်ကန်ကန် ပြည်သူကြိုက်တဲ့အစိုးရမှ မတက်ရသေးတာ။ အထူးသဖြင့်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ကြံ့ဖွံ့တွေပဲ နေရာများများယူပြီးတော့ သူတို့ပဲ အုပ်ချုပ်စီမံနေတာပဲ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို အကောင်အထည် ဖော်မပေးလို့ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရက အနှစ် ၂၀ ကျော် လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာ။ အဲဒီတော့ ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ ဖော်မယ်၊ ကျမတို့ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံမှာ အများကြီး တိုးတက်လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခု ကျမတို့ရဲ့ အဓိကက ညီညွတ်မှုပါပဲ။ CEC ရဲ့ သဘောထား၊ CC ရဲ့ သဘောထား၊ တိုင်းရဲ့သဘောပါ။ အဲဒီအများစုရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာ ကျမတို့လိုက်မှာပါ။”
ဦးကျင်ရှင်းထန်ကတော့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာ လစ်လပ်နေရာကိုသာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ဒေသတွေမှာတော့ လစ်လပ်နေရာ မရှိတဲ့အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေမ ရှိကြောင်းတွေကို ထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် က ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်မတင်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မ၀င်ဆိုတာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်မှုရှိမရှိ ဆိုတာတွေကိုမူတည်ပြီး လက်ခံစဉ်းစားသွားဖို့ သဘောထားတွေရှိကြောင်း ပြောဆိုနေသလို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အပါအ၀င် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် အသီးသီးကခေါင်းဆောင်တချို့ ကတော့ အောက်ခြေထုရဲ့ သဘောထားဆန္ဒတွေကို မေးမြန်းဖို့ကိုလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် က ခေါင်းဆောင်တွေကို တင်ပြထားတာပါ။ ဒီအတွက် ဒီကိစ္စကို လွယ်လွယ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ဖို့ ခက်ခဲနေကြောင်း ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့ စီးပွားရေးနှင့် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကိုမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်
နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက Chatrium Hotel တွင်ပြုလုပ်နေသည့် စီးပွားရေးနှင့် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်
ဓာတ်ပုံ.. Burma VJ
အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ဓာတ်ပုံ တွေ ကို အခု လို ဆိုင် တွေ မှာ ရောင်းချ လို့ရနေ ပြီ
အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ဓာတ်ပုံ တွေ ကို အခု လို ဆိုင် တွေ မှာ ရောင်းချ လို့ရနေ ပြီ လို့Wall Street Journal မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, November 07, 2011
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုအမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးခြင်းဖြင့်စတင်ပါ
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးခြင်းဖြင့် စတင်ပါ
၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က အကျဉ်းသားများအား လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့မှုအပေါ်တွင် တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟု သာမန်အားဖြင့်မြင်နိုင်သော်လည်း အဓိကကျသော တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ရွေးကောက်ခံ အမတ်များနှင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူများ လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသည့်အတွက် သံသယဖြစ်စရာ ဖြစ်နေပါသည်။
ထိုကြေညာချက်အရ လွတ်မြောက်လာသူ ၆၃၅၉ ဦး အနက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမှာ မိမိတို့ အေအေ ပီပီ စာရင်းအရ ၂၄၀ ဦးသာ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ ပထမအကြိမ်ပေးသော လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် တွင်လည်း လွှတ်ပေးသူ ၁၄၆၀၀ အနက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမှာ မိမိတို့၏စာရင်းအရ ၇၂ ဦးသာ ပါဝင်ခဲ့သည်။
ပိုဆိုးသည်မှာ မြန်မာအစိုးရဖက်မှ ယနေ့အထိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမ ရှိပါဟု ငြင်း ဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင်မူ မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် အချို့က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၀၀ ခန့်လွှတ်ပေး လိုက်သည်ဟု ရှေ့နောက်မညီ ပြောဆိုနေကြပြန်ပါသည်။ ဤအချက်သည် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ဓားစာခံများသဖွယ် သဘောထား၍ နိုင်ငံတကာနယ်ပယ်တွင် နိုင်ငံရေးအမြတ်ရရေးအတွက် ကစားပွဲတစ်ခုကဲ့သို့ ပြုလုပ်နေခြင်းမှာ ထင်ရှားနေ ပါသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုးရနှင့် အေအေပီပီ အပါအ၀င် အတိုက်အခံများအကြား ကွဲလွဲမှုများရှိနေခြင်းသည် နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နှင့် ထိုနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်အရ လုပ်ဆောင်မှု များကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ တန်ဖိုးများအပေါ်ထားရှိသည့် သဘောထားများ မတူညီခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
အေအေပီပီမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော “မည်သူတို့အား နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်သည်” ဆိုသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် “ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒ ပြခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင် လှုပ်ရှားခြင်း (သို့မဟုတ်) အားပေးထောက်ပံ့ကူညီခြင်း (သို့မဟုတ်) ထိုသို့ပါဝင်သည် ထောက်ပံ့ကူညီသည်ဟု စွပ်စွဲခံရခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ထောင်အသီးသီး၊ ရဲဘက်စခန်းများနှင့် စစ်ကြောရေးစခန်းများတွင် ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ခြင်းခံရသော မည်သူကိုမဆို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟု သတ်မှတ်ပါသည်” ဟု အတိအလင်း အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထာပြီးဖြစ်သည်။
မိမိတို့ အေအေပီပီမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ဤသတ်မှတ်ချက် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အညီ အေအေပီပီမှ ကောက်ခံရရှိထားသော စာရင်းဇယားများအရ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း ၁၆၆၈ ဦးသည် အကျဉ်းထောင်များ အတွင်းတွင် ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ မိမိတို့အေအေပီပီအပါအ၀င် ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှ စုဆောင်းထားသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စာရင်းဇယားများမှာ မှန်ကန်မှုမရှိဟု တဖက်သတ်ငြင်းဆိုနေမည့်အစား မှန်ကန်သည်ဆိုသည့် ၎င်းတို့၏စာရင်းကို အမြန်ဆုံး တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန် မြန်မာအစိုးရတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
• စတုတ္ထအဆင့်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးပြီး ပြန် လည်လွတ်မြောက်လာသူ အားလုံးကိုလည်း ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်မှုများအရ နိုင်ငံရေးတွင် လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခွင့်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း စာရင်းအမှန်ရနိုင်ရန် နိုင်ငံတကာမှလည်း အကြံပြုချက်များ တောက်လျှောက်ပေး နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ မိမိတို့အေအေပီပီမှလည်း အပြုသဘောဆောင်သော အကြံဉာဏ်များ၊ တိုက်တွန်းမှုများ ပေးလိုပါသည်။
မြန်မာအစိုးရနှင့် တောက်လျှောက် ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေသော အိုင်စီအာစီကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်း ကောက်ခံနေသော အဖွဲ့အစည်းများ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဦးဆောင်သည့် လွတ်လပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် စသည်တို့နှင့်ပူးတွဲ၍ အဖြေရှာမည်ဆိုလျှင် ရလဒ်ကောင်းများထွက်ပေါ်လာနိုင်သလို ပြည်တွင်းပြည်ပ၏ အသိအမှတ်ပြုမှု၊ ယုံကြည်မှုများကို တိုးပွားလာစေ မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက မိမိတို့အေအေပီပီအနေဖြင့်လည်း လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများ ကို ကြိုးစားရှာဖွေ ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
ကိုဇော်ထွန်း (အလုပ်အမှုဆောင်) +၆၆ (၀) ၈၉ ၉၅၂ ၇၃၄၀
ကျောက်ဖြူ မဒေးကျွန်းတွင် ရေနံတိုင်ကီများ စတင် တည်ဆောက်ပြီ
တရုတ်မှ တည်ဆောက်နေသော ကျောက်ဖြူမြို့နယ် မဒေးကျွန်း ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းတွင် ရေနံ စိမ်းများ သိုလှောင်ရန် အတွက် ဆီတိုင်ကီ ( Oil Tanks ) များကို စတင် တည်ဆောက်နေပြီ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကျွန်းပေါ်မှ အငယ်တန်း အင်ဂျင်နီယာာ တစ်ဦးက ရေနံတိုင်ကီများနှင့် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်နေကြောင်းကို ယခုလို ပြောသည်။
" ဟုတ်ပါတယ် ဆီတိုင်ကီ တွေကို စတင်ဘာလက စပြီးတော့ လုပ်ဆောင် နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလောလောစဉ်တော့ အောက်ခံ ဖောင်တည်းရှင်း ကို ဦးစွာ ပထမ ပြူလုပ်နေတယ် ၊ အခုတော့ မြေတွေကို စက်တွေနဲ့ တူးဖော်တဲ့ အဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တဘက်မှာ ကွန်ကရက် ကန်တွေ ဖေါင်းဒေရှင်းကို စလုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ရေနံတင် ဆိပ်ကမ်းနှင့် ရေနံစိမ်းတိုင်ကီများကို လာမည့်နှစ် နှစ်လည်ပိုင်းတွင် အပြီးသတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သူက ပြောသည်။
" အဲဒီ ရေနံတင်ကီတွေက အာဖရိကနဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းက လာတဲ့ ရေနံစိမ်းတွေကို သိုလှောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ကို စတင် ပို့လွှတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ နေ့ဆိုင်း ညဆိုင်း အသုံးပြုပြီး တည်ဆောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တည်ဆောက်တာကတော့ တရုတ်အင်ဂျင်နီယာတွေ ဦးဆောင် တည်ဆောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
တရုတ်များသည် အဆိုပါ ရေနံစိမ်းများ သိုလှောင်ရန် အတွက် တိုင်ကီများ၊ အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘိလပ်မြေများကို အသုံးပြုခြင်း မရှိဟု သူက ပြောသည်။
" ကျနော်တို့ ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာ မြန်မာပြည်က ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုတာ နည်းပါတယ်။ အကုန်လုံး တရုတ်က လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိလပ်မြေတွေ ဆိုရင်လည်း မြန်မာပြည်က ဟာတွေကို အသုံးမပြုပါဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မြန်မာက ဘိလပ်မြေ ဈေးတွေလည်းကြီးတယ်။ ဘိလပ်မြေ မှုန့်တွေလည်း မသန့်ဘူး။ တရုတ်တွေ ကိုယ်တိုင် နိင်ငံခြား ပညာရှင်တွေခေါ်ပြီး ဓါတုပစ္စည်းတွေနဲ့ ဖော်စပ်ပြီး ကိုယ်တိုယ် အမှုန့်ကြိတ်ပြီး သဲ ၊ ကျောက်တွေ နဲ့ ရောစပ်ပြီးတော့ ဘိလပ်မြေတွေ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါအတွက်လည်း တရုတ်က လိုအပ်တဲ့ စက်ကရိယာတွေကို မှာယူတင်သွင်းပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
သို့သော်လည်း မြန်မာက ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို သုံးစွဲကြောင်းနှင့် တရုတ်က မည်သည့် ပစ္စည်းကို မဆို သင်္ဘောကြီးများဖြင့် အစစ်အဆေး မရှိ သယ်ယူ လာယူလာပြီး အဆိုပါ စီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုကြောင်း သူကဆက်ပြောသည်။
တရုတ်သို့ တင်ပို့မည့် ရေနံပိုက်လိုင်း ကီလို မီတာ ၂,၃၈၀ ခန့် ရှည်လျားပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သို့ ကီလိုမီတာ ၈၀၀ ခန့် သွယ်တန်းသွားမည် ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ် လျှင် ရေနံစိမ်းတန်ချိန် ၂၂ သန်းခန့် ပို့ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၎င်းအပြင် တရုတ်သို့ တင်ပို့မည့် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗ မီတာ ၁၂ ဘီလျံခန့်ကို ရခိုင် လုပ်ကွက်ရှိ A (၁) နှင့် A (၃) လုပ်ကွက်များမှ တစ်ဆင့် တင်ပို့မည် ဖြစ်သည် ။
မဒေးကျွန်းရေနက်ဆိပ်ကမ်းရှိ စီမံကိန်းထဲတွင် တန်ချိန် သုံးသိန်း ရေနံတင်ဆိပ်ကမ်း၊ ၂ ဒသမ ၉ ကီလိုမီတာရှိ ရေလမ်း ကြောင်းတစ်ခု၊ အရှည် မီတာ ၁၅၀ ရှိ တန်ချိန် ၅,၀၀၀ သင်္ဘောများ ရပ်နိုင်သည့် ဆိပ်ခံ တံတားတစ်ခု၊မီတာ ၄၈၀ ရှိ တန်ချိန် သုံးသိန်း ရေနံတင် ဆိပ်ခံ တံတား တစ်ခု၊ ကုဗမီတာ ခြောက်သိန်း ခန့်ကျယ်သော ရေလှောင်ကန်တို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဆိပ်ကမ်းနှင့် ရေနံတင် စီမံကိန်း အတွက် မဒေးကျွန်းတွင် လယ်မြေ အများအပြားကို လျော်ကြေးငွေ အနည်းငယ်ပေးပြီး သိမ်းယူသွားသဖြင့် ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် လုပ်ကိုင်လာသော ဒေသခံများမှာ လယ်မဲ့ ယာမဲ့ ဘ၀သို့ ကျရောက်နေကြောင်း သိရသည်။
ခွေးရူး အကိုက်ခံရသည့် မောင်တောမှ ကလေး ၂၀ နီးပါး ဆေးဝါး မလုံလောက်၍ စိုးရိမ်ရ
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက် မောင်တောမြို့တွင် တစ်နေ့တည်း၌ ကလေး ၂၀ နီးပါး ခွေးရူး အကိုက်ခံရပြီး အဆိုပါ ကလေးများကို ကုသရန် မောင်တောဆေးရုံတွင် ဆေးဝါး အလုံလောက် မရှိသဖြင့် သူတို့အတွက် စိုးရိမ်ရကြောင်း မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောသည်။
" ကလေး (၄) ဦးအတွက်ဘဲ ခွေးရူးကုတဲ့ ဆေးရှိတယ်။ ဒါကြောင့် အများစု ကလေးတွေက ဆေးကုသမှု မခံယူရဘဲ ဖြစ်နေတယ်။ အခုသူတို့ အတွက် စိုးရိမ်နေရပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ခွေးရူးကိုက်ခံရသည့် ကလေးများမှာ မောင်တောမြို့ပေါ်နှင့် သုံးမိုင်၊ လေးမိုင်နှင့် ဝေသာလီကျေးရွာ မှ ဖြစ်ကြသည်။
ကလေးများမှာ လွန်ခဲ့သည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က တရက်တည်းတွင် အကိုက်ခဲ့ ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မောင်တောမြို့ခံတဦး ကလည်း အတည်ပြု ပြောသည်။ သို့သော်လည်း ခွေးရူးကိုက်ရာတွင် ပုံမှန် ခြေအောက်ပိုင်းကို ကိုက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ မျက်နာနှင့် ဦးခေါင်းကို ကိုက်သည်ဟု သိရသည်။
အကိုက်ခံရသည့် ကလေးများကို သူက ယခုလို ပြောသည်။
" သုံးမိုင်နဲ့ လေးမိုင် ရပ်ကွက်က ၁၂ ယောက်၊ မောင်တောမှာ ၈ ယောက်ခန့် အကိုက်ခံရတယ်။ တနေ့တည်းမှာ အ ကိုက်ခံရတာ။ ကျွန်တော်အိမ်က ခွေး လည်းရူးလို့ မနေ့က သတ်ပစ်လိုက်ရတယ်။ အကိုက်ခံရတဲ့ ကလေးတွေက ဆေရုံတက်နေကြတယ် ။လေးမိုင်ကလေးတွေနဲ့ ဝေသာလီက ကလေးတွေ အားလုံး က မျက်နှာမှာ အကိုက်ခံရတယ်။ မောင်တောမှာတော့ စံပြရွာနဲ့ ရွာသစ်ရွာက ကလေးတွေ အကိုက် ခံရတယ်။"
ယခုကဲ့သို့ ဆေးရုံသို့ ခွေးရူးအကိုက်ခံရသည့် ကလေးများ ဆေးကုသရန် တက်ရောက်နေကြ သော် လည်း ဆေးရုံတွင် ဆေးမရှိသည့်အတွက် ကလေး ၂၀ ယောက်တွင် ၄ ဦးသာ ခွေးရူးဆေးထိုး ရပြီး ကျန် ကလေးများမှာ ယခုအချိန်ထိ ဆေးမထိုးရသေးကြောင်း၊ သူတို့ အနေဖြင့် မည်သို့ လုပ်ကိုင်ရမည်ကို မသိကြောင်း လေးမိုင် ရပ်ကွက်မှ မိဘ တစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး မောင်တောဆေးရုံသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်ရာ တာဝန်ကျဆရာဝန် တဦး က ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
" အခု ဆေးရုံအုပ်ကြီး အစည်းအဝေး တက်နေပါတယ်။ ဆေးရုံအုပ်ကြီးလာမှ မေးပါ။ သူဘဲ ပြောခွင့်ရှိ တယ်။ ပြီးတော့ ဆေးရုံ သတင်းကို ဆေးရုံ အုပ်ကြီးမှ အပ ဘယ်သူမှ မပြောရဆိုပီး ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနက တားထားပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
မောင်တော လေးမိုင်ရှိ ဆေးခန်းတခုကလည်း ကလေးများ ခွေးရူး ကိုက်ခံရပြီး ဆေးရုံ တင်ပို့ထားသည်မှာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း ပြောဆိုသော်လည်း အရေအတွက် အတိအကျကို သူ့အနေနှင့် မသိရှိကြောင်း ပြောသည်။
ယခုအခါ ကလေးများကို ကိုက်ခဲ့သည့်ခွေးရူးတချို့ကို ကျေးရွာသားများက သတ်ပစ်ပြီးဖြစ်သော် လည်း မောင်တောမြို့တွင် ခွေးလေခွေးလွင့်များ ပေါများနေပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တစုံတရာ အရေးယူ လုပ်ဆောင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့် ကလေးမိဘများက ခွေးရူးအကိုက် ခံရမည့် အန္တရာယ်ကို အထူး စိုးရိမ်နေကြကြောင်း အဆိုပါ မောင်တောမြို့ခံကပြောသည်။
'၁၁၊ ၁၁၊ ၁၁' အခမ်းအနားများ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတက...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဝန်းရံပေးပါ။( ရေးသားသူ - ကိုေ...
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ဦး...
အသက်မပြည့်သော မြန်မာကလေးလုပ်သားများ တရုတ်နိုင်ငံ တ...
ကလေးငယ် ဆယ်ဦးကျော်အား ရောင်းစား ခဲ့သော နိုင်ငံခြာ...
ဘာလီကျွန်းတွင် ထိပ်သီးညီလာခံအတွက် အာရှခေါင်းဆောင်မ...
နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဥရောပသမဂ္ဂဝန်ကြီးတစ်ဦး မြန်မာသို့ ...
MICB ဘဏ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ကျပ်သိန်း ၉၀ ကျော် အလွဲသုံးစာ...
အလတ်စား ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၃ ခုအတွက် တရုတ်-မြန...
ကိုဇာဂနာ၏ မြပုဏ္ဍမာအငြိမ့်ကို ဒုတိယအကြိမ် အဖြစ် အမေရ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒါရိုက်တာ Besson အား သူမ၏ ဘဝဇာ...
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပ သမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီးနှင့် အင...
၁၃လမ်း(အောက်)၊ဦးဘဂျမ်းလမ်းမှာ ကျင်းပတဲ့ (၆၈)ကြိမ်...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တစ်နှစ်အကြာတွင...
မဲခေါင်မြစ် တရုတ် ၁၃ ယောက်သတ်ခံရမှု ထိုင်းတပ်မတော်...
နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့ စီးပွားရေးနှင့် ဖွံဖြိုးတိုးတက...
အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နဲ့ဒေ...
ကျောက်ဖြူ မဒေးကျွန်းတွင် ရေနံတိုင်ကီများ စတင် တည်ေ...
ခွေးရူး အကိုက်ခံရသည့် မောင်တောမှ ကလေး ၂၀ နီးပါး ဆေ...
မြန်မာအစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစ...
မကြာသေးမီမှ လွတ်မြောက်လာသော နိုင်ငံရေးသမား၈ဦးအား ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းကျခံရသူများ အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြော...
အော်ဂဲနစ် အသိကို မူလတန်းကလေးတွေအထိ ပေးသင့်ကြောင်း ...